Kafaalo 2013 by Kafaalo Magazine - issuu
soomaalida norway«u celinta dadkeeni fahankoodi saxda ahaa»2013 // www.kafaalo.orgCirku Tiirar
Qur’aanku wuxuu bidhaaminayaa inaan cirka laga
arki karin tiirar haya, sayniskuna wuxuu bidhaamin
tiirar inay jiraan. Waxaan dhex quusaynaa sida ay
isku waafaqayaan Quraanka iyo cilmiga sayniska.Bogga 10Carada Sidee u
Xakameyn Karnaa?Dhaqaalaha &
Dr. Cali M. Saalax?Qofka markuu caroodo indhihiisu
waa ay guduudanayaan, xididdadiisuna
waa ay soo fuurayaan.Fahmidda dhaqaalaha waxay qofka u
fududeyn inuu qaato go'aamo wax ku
oola, inta uusan ganacsi gelin.Cilmigii Masaajidda Dhagaxtuur,
Ceel-hindi iyo Siigaale ayaa inbadan iiga
qiimo badan jaamacadihii.Bogga 16Bogga 30Bogga 26kafaalo magazine 20131content16222636
Sh. Aadam Sh. Cali M.38
Cawil Cabdiraxmaan A.
10	Samadu Tiirar Ma leedahay?
Dr. Cabdullahi Spaanish
Carada Saameynteeda& Xakameynteeda
Dr. Saadiq Eenow22	
Dr. Saadiq EenowWaa Kuma Dr. Cali
26	Maxamed Saalax?
Cumar M. CabdiraxmaanFahmidda Asaasiyaadka
Mukhtar Qoransay36	
Yuusuf Xasan M.
Inta aadan Safarka Bilaabin
Saciid C. Shire30
2kafaalo magazine 20130604editors letterkusoo dhawoowwelcomeWaxaan mar labaad idinkugu soo gudbinaynaa Kafaalo Magazine 2013
(KM), mawduucyo kala duwan oo ay kamid yihiin:
Tarbiyadda wanaagsan iyo waxbarashadu waa iftiinka nolosha ee uu
qofku kaga gudbi karo mugdiyo badan oo lasoo gudboonaanaya inta
uu nool yahay. Waxaa markaa lagama maarmaan ah in caruurteena ay
helaan tarbiyad iyo waxbarasho ku fadhida tiirar adag oo tayaysan.
Arinkaan wuxuu asaas u yahay in caruurtu hesho koriin wanaagsan oo
anfacaya iyaga mustaqbalkooda iyo bulshada ay la nool yihiin.Once again, here is another round of useful
and interesting articles on education,
science, history and economics in Kafaalo
Magazine 2013.Dhanka cilmiga sayniska, bini’aadamku wuxuu la wadaagaa xayawaanaadka kale dareenka, maqalka, araga, urinta iyo waxyaalo kale, laakin
wuxuu kaga duwan yahay fakarka. Waana arin Ilaah ku tirtirsiiyay inay
aadanuhu ufakaraan mid-mid ama labo-labo. Walow caqliga insaanka
uu ku xadidan yahay nolosha inta muuqata, hadana waxbadan wuxuu
ku haleelaa raadraaca cilmiga, iyo ku fikiridda mugga caqligiisu qaadi
karo. Insaanku waxbuu ka ogaaday dhulka, cirkana waxbadan ayuu
ilaa hadda iska weydiiyaa. Ilaahay wuxuu noo sheegay inaysan cirka
celinayn tiirar aan arki karno. Waxaa naloo cadeeyay inaan arki karin,
laakin waa arin aanan naloo diidin, inay jiri karaan shan tiir ama kabadan oo cirku kutaagan yahay.
Caradu waa dareenka ugu weyn dareenada insaanka ee burburin kara
qofka noloshiisa, qoyskiisa, bulshadiisa ama qaran dhan. Qof carooday
awgiis ayuu dhiig badan u daadan karaa ama qaran dhan u dumi karaa,
kadibna umad dhan u dib dhici kartaa qarniyo. Sidaas oo ay tahay waa
dareen lagama maarmaan ah oo difaacaya jiritaankeena insaanimo iyo
waxa aan u taaganay. Xalka labadaas u dhaxeeya waa inaan dheelitirno
Diyaariyaha & Isku-dubaridaha KMMukhtar QoransayMany go through difficulties and periods
of good and bad as a result of their upbringing and perhaps even their family life, but
never really learn any lessons from these
experiences. A lack of education can be a
huge contributing factor to a difficult life.
In growing up, education is an important
and indispensable part of life helping one to
achieve one's goals. Plato was right to argue
that the goal of education is to produce
serious citizens who understand, agree
with and maintain social order. Therefore,
education is more than learning reading, writing and mathematics. It’s one of the most
important investment parents can make for
their children. It equips children to survive in
this challenging world in a way that benefits
them and the society they live in as well as
Anger is one of our most powerful emotions
which can cause enormous harm for one's
self, family, society and nation. However
we all tend to feel it from time to time and
it’s a perfectly natural emotion which can
be necessary for self-protection and the
protection of our values. The first step in
managing anger is recognizing and accepting your right to be angry. Managing anger
is not eradicating it, but it’s about taking
control and making a choice. It needs to be
handled maturelyEditor-in-chief of Kafaalo Magazinekafaalo magazine 20133waxbarashadaÂŤdhaqanka gundhigga
u ah bulshada oo la
xoojiyo ayaa asaas
u ah horumarka
ilaalinta bulshadaÂťAdam Sh. Cali.Horumarka waxbarashada iyo
Waalid walba wuxuu jecel yahay
caruurtiisu inay yeeshaan
tarbiyad wanaagsan, isla
markaana heersare ka gaaraan
waxbarashada, laakin waayahaan
danbe waalidkii waaba looga xoog
batay tarbiyadii caruurtooda.
adam sheikh ali mahmoudelectrical engineer bsc
practical pedagogy diploma
didactics in mathematics and physics
msc in international and
multicultural educationQalabka Waxbarashada.
photo istockphoto/thinkstock4kafaalo magazine 2013waxbarashadaReform ped.
institutionsXoog yarClassificationsPrimary &
ng• Nabiga (scw): «M
agsan oo kudhisa
• Barbaarin wana
o in la
sax ah iyo xurmo
• Guriga ayaa dh
inta ay jiraan 3-4
ar u ah
ayay kahelaan dh
an-gudbin mid bil
• Labo nooc dhaq
ah (primary socia
1. Ubad lamida
la dhaqan aheyn
2. Ubad aan cidna
3. Ubad kaduwa
lgal dhaqan lahey
4. Ubad aanan faXoog badanW
asta oo dhashaSt
socializationShax 1 Muujinaysaa xoog badnaanta dugsiga.
mattias øhra 2008: hoem, bernstein & focaultPISA results Quality in education
The decline pof modern schooling and the
emergence of a new civic sector of education.
Shax 2 Muujinaysaa qiimeyn wadamda USA,
Norway & Finland.
prof. christian w. beck - 2008«Mid kasta oo dhashaa waxa
uu ku dhashaa suubanaan,
waxaase beddela kuwa dhalay»
Nabiga (scw)Bulsho kastaa waxay doonaysaa inay horumar
ka samayso xagga wax soosaarka, aqoonta
iyo tayada nololeed. Waxaa Nabigu (scw) yiri:
“Mid kastoo dhashaa waxa uu ku dhashaa
suubanaan, waxaase beddela kuwa dhalay”.
Xirfadaha markaas jirey oo ganacsato,
xoolo-dhaqato ama beeraley ah waxaa lagu
baran jirey shaqada dhexdeeda (on the job).
Waxaase Nabigu (scw) tilmaamayey muhiimna
ahayd in barbaarin wanaagsan oo caqiida
sax ah iyo xurmo kudhisan la siiyo carruurta.
Bulshooyinka dambe waxaa sii yaraanaysa
kaalintii waalidiintu kulahaayeen barbaarinta
waxaana weynaanaysa qaybta uu dugsigu
ku yeeshay dhaqan gudbinta (socialization).
Waxaan ku eegaynaa qormadaan siduu
dhaqan gudbintaas u gudan karo dugsigu iyo
caqabadaha ka hor imaan kara.waxaa iswaydiin mudan: Maxaan
culayska usaaraynaa kaalinta dugsigu ku
leeyahay barbaarinta iyo dhaqan gudbinta?
Waxaan taas kaga jawaabaynaa inaynu
eegno qofka yar laga bilaabo dhalashada ilaa
iyo dad’a 18jirka halka uu kuqaato. Inta ka
horraysa 3-4 jir waxaan dhihikarnaa waxaa
dhaqangudbinta xukuma guriga. Ilmuhu
cid kale oo wax ugudbisa xiriir lama laha.
Marka uusoo gaaro 4 jir (ama kayarba) waxaa
la geeyaa dugsi oo maalinta inteeda badan
halkaas buu ku tirsanyahay. Kuwa “diaspora”
ku dhashayna waxaa la geeyaa xadaanada iyo
wax u dhigma. Marka uu gaaro 6 jirna wuxuu
u gudbayaa dugsiga oo uu kaqaadanayaa
dhaqanka iyo aqoonta kaleba. Waxaan halkaas
ka arkaynaa in dugsigu lawareegey kaalintiiwaalidku lahaa xagga dhaqangudbinta.
Waxaa loo kala qaadaa dhaqangudbinta
labo qaybood mid gundhig ah (primary
socialization) iyo mid habaysan (secondary
socialization). Dhaqangudbinta habaysan
waxaa laga helaa dugsiga iyo guriga dibaddisa.
Haddi aan dugsiga iyo gurigu isku aragti iyo
qorshe ahayn waxaa adkaanaysa in dantii
laga lahaa dugsigu fuliyo. Hoem wuxuu u
kalasaaray dhaqan gudbinta affar.
1. In dugsigu waafaqsan yahay dhaqankii
gundhigga u ahaa bulshada oo markaa
soo saaro ubad bulshadooda la qiyam iyo
dhaqan ah (reinforcing socialization).
2. In gundhiggii qaar dugsigu uusan tixgelin
ardayguna dugsiga u arko inuu dan
uyahay markaa dhaqankii ka qaldamo
3. In dugsigu gundhiggii oo dhanba kasoo
horjeedo oo dhaqan ka duwan faafinayo,
ardaygiina dan u arko dugsiga. Natiijadu
markaa noqoto ardaygii oo kataga
dhaqankii gundhigga ahaa oo wixii dugsigu
keeno dhaqan u noqdaan (resocialization).
4. In dugsigu dhaqankii gundhigga ahaa
kahorjeedo ardayguna u arkin inuu dan
uyahay. Ardaygu inuu markaa joogo dugsiga
iyo inuusan joogin waa isugumid waxna ka
kororsanmaayo (no socialization).affartaa waxaa ugu habboon nooca ugu
horreeya. Basil Bernstein (2000) iyo C. W. Beck
(2007) labaduba waxay leeyihiin in dugsigu
marka uu yahay soo jireenraac (traditional)
ugu xoog badan yahay dhaqan gudbiyeyaashamarka laga eego salabka uu haysto iyo luqada
uu adeegsado qoyskuna ugu taag daranyahay,
fiiri Shaxda 1.daraasad lagu sameeyey tartanka
dugsiyada dalalka ka qaybqaata PISA
(Program for International Student
Assessment) waxaa kasoo baxay in dalka
Finland uu in badan ka horreeyo Maraykanka
iyo Iskandiviyaanka ayna sannad kasta
sii fiicnaanayso halka Maraykanka iyo
Iskandiviyaanku ay sii dhacayaan. C. W. Beck
wuxuu ku sharxay arrintaas inay Maraykan
iyo Iskandiviyaanka gaareen lama dhaafaankii
ugu sareeyey (peak point) oo marka ay
dheregtu keentay inay hoos usoo dhacaan
(shaxda 2), wuxuuna leeyahay waxaa sabab
u ah «GDP per capita» oo aad u sarreeya
waddamadaas. Wuxuuse islamarkaas qirayaa
in carrurta guryohooda ama dugsiyada
dhaqanka ku adag wax lagu baro ee
waddammadaas inay la tartami karaaan kuwa
Finland.arrinkaas waa lagu qabsaday oo waxay
sugayaan IMF, WB iyo UN intuba in Finland
ay ka sarrayso Maraykan xagga GDP per
capita. Waxaase uu kaga duwan yahay dugsiga
Finland dugsigooda xagga dhaqan raaca.
Waxaa markaas lagu fasiri karaa in dhaqanka
gundhigga ah oo la xoojiyo uu asaas u yahay
horumarka waxbarashada iyo ilaalinta
bulshada.Caruur wada ciyaaraysa.
photo hemera/thinkstockkafaalo magazine 20135waxbarashadaMuxuu yahay ujeedka Manhaj Waxbarasho?Ujeeddada
Ujeedooyinka iyo dajinta manhaj way ku kala duwan yihiin
wadamada dunida, maadama ay kala dhaqamo, diimo iyo
aragtiyo duwan yihiin. Sidaas oo ay tahay waxyaalaha
qaarkood way wadaagaan.
cawil cabdraxmaan axmedbachelor - teacher education for bilingual teachers
master of multicultural and international educationFasal isku habaysan. Kafaalo Magasine 2012 waxa aynu si gaar
ah ugu xusnay qaybaha uu ka kooban yahay
cilmigani iyo isku xirnaantooda. Waxaa
aynu tilmaannay qaab lix-waaxood ah oo
ay doorteen BjĂ¸rndal iyo Lieberg (1978).
Lixdaas qaybood oo kala ah: Waxa la
baranayo, Sida wax loo baranayo, Qiimaynta,
Duruufta ku meegaarsan waxbarashada,
Xaaladda waxbarashada iyo ugu danbeyn
Ujeeddada waxbarashada.6kafaalo magazine 2013Waxaa aynu adkaynay in aanay kala
maarmin qaybahaasi, isla markaasna
aanay muhimmad ahaan kala sarrayn
maaddaama maqnaanta ama hoos u dhaca
ku yimaada mid ka mid ahi uu saameyn
toos ah ku yeelanayo qaybaha kale oo
dhan. Qoraalkeennaan waxaa aynu ku soo
koobaynaa heerarka, diyaarinta iyo fulinta
ujeeddada waxbarashada. Ujeeddada ama
danta waxbarashadu waxaa ay martaaheerar kala duwan oo kala sarreeya.
Waxaase ay marka kowaad ku qeexan tahay
manhajka waxbarashada. Waa in aynu sidaa
darteed wax ka garanno waxa uu yahay
manhaj waxbarasho, si aynu u fahamno
ujeeddada waxbarashada.waa maxay manhaj waxbarasho?
Waddammadu waa ay ay ku kala duwan
yihiin aragtida, diyaarinta iyo fulintawaxbarashada
Manhaj-mabda’eedkaManhajka rasmiga ah«Manhaj waa inlagudbiyo mabaadi’da
ugu muhiimsan ee
taasoo lala tiigsan karo
baaris furan.»Cawil C. Axmed.Manhajka la fahmeyManhajka la fuliyey
Manhajka lala kulmay /
Shax 1 Wajiyada Manhajka.
goodlad m.fl. 1979 in ImsenArdayda Kafaalo Schools Cadaado oo dood-wanaag
cilmiyeed ku wadaagaya.  photo caruuse/kafaalophoto comstock/thinkstocknidaamyadooda waxbarasho oo inta badan
ku xiran waddan walba iyo hab-dhaqankiisa
bulsho iyo siyaasadeed taasoo sida la
ogyahay ay waddammadu ku kala duwan
yihiin.Waxaase si guud jirta in manaahijtaas
kala duwani ay wadaagaan in ay yihiin:
• Nidaam ay dawladi wax ku hoggaamiso
• Hagid iyo talasiin macallin
• Wargelin arday iyo waalidSi sidaas ka kooban oo loo qeexay manhaj
waxbarsho waa: «isku day in la gudbiyo
mabaadi’da iyo tilmaamaha ugu muhiimsan
ee barnaamij waxbarasho taasoo lala
tiigsan karo baaris furan isla markaasna ay
suuragasho in lagu fuliyo qaab tayo leh»1.
Waxaa ay Gunn Imsen (1999) tilmaantay
in ay sida qeexiddani tilmaamayso
lagama maarmaan tahay in manhajka
waxbarashadu uu noqdo mid furan oo cidArdayda Kafaalo Schools Cadaado oo kujira
imtixaanada teeramka sanadka 2012 Kafaalo
Schools Cadaado. 
photo caruuse/kafaalowaliba akhrisan karto si loo helo fursad
looga hor-imaan karo ama lagu dhaliili karo.
Sidoo kale waa in aanu noqon fikrado iyo
mabaadi’ aan marna la gaari karin oo ka
sarreysa awoodda ardeyda iyo fuliyayaasha
shaqada waxbarashada.sida qeexiddu sheegtay waa in
ay suuragal tahay in iyadoo la raacayo
manhajka la fuliyo shaqo tayo leh. Waxaa
1) stenhouse 1975 iyo Imsen 1999:171kafaalo magazine 20137waxbarashada
aynu si kooban usoo qaadan karnaa
qodobbo uu manhajka waxbarashadu
xambaarsan yahay, si aynu u garanno
danaha ka danbeeya dejinta iyo fulinta
• Waxaa uu ku salysan yahay dano
• Waa arrin mar walba dhalisa dood
badan iyo iska hor-imaad ka dhexeeya
siyaasiyiinta iyo xirfadleyda waxbarashada
• Waxaa jira manhaj/ barnaamij waxbarasho
oo heer qaran ah, mid heer dugsiyeed
(iskuul) iyo mid heer shakhsi ah
• Waddammada qaarkood waxay leeyihiin
manhaj ku saabsan waxa la rabo in ay
dhacaan (danta) iyo waliba waxa dhacaya
(dhabta), meesha waddammo kalana ay
leeyihiin mid ku saabsan waxa la rabo in ay
dhacaan (danta) oo kaliya
• Waa dhaqan soo jireen ah oo ku salysan
» Mabaadi’ aasaasi ah
» Aragtiyo falsafadeed
• Waxaa uu hoggaamin u yahay iskuullada
• Waa sababta, waxa, goorta, meesha, sida
iyo qofka wax la barayo ama wax lala
baranayo (Why, what, when, where, how
and with whom to learn)
• Waxaa ay fulinta manhajku ku xiran tahay
sida uu macallinku u fahmo ama uu u
fuliyo. Sidaa darteed waxaa jira manhaj
qarsoon (hidden curriculum). Tusaale:
haddii uu macallimku gabdhaha iyo
wiilasha si kala duwan wax u baro ama
ula kala dhaqmo, taas oo aanu ka raacin
manhaj qoran. Amase haddii uu ku kala
saaro ardayda midab, dhalasho, diin iwm.
Si loo muujiyo heerarka kala duwan ee
manhajku maro ayaa waxaa ay aqoonyahaanada waxbarashadu ogaadeen shan
waji oo uu manhajku leeyahay:halkaan kuma faahfaahin karno
wajiyadaan kala duwan ee manhajku maro
iyo isa-saamayntooda, waxaase mudan in la
darso jihada fallaaraha ee sawirka iyo kalasarraynta wajiyada. Si aynu usii fahamno
dhismaha manhajka aynu tusaale u qaadanno
Norway, innagoo waliba faallo ka bixinayna
qaybaha manhajka ee waddankaan. Manhajka
waxbarashada Norway (Kunnskapsløftet),
waa saldhigga iyo jaangoynta wabarashada
dugsiyada hoose-dhexe iyo sare ee Noorway.
Waxaa uu ku salaysan yahay xeerka
waxbarashada (Opplæringsloven). Waxaana uu
ka kooban yahay:
Qaybta guud ee manhajka: Qaybtani
waxay faahfaahisaa xeermabda’eedka
waxbarashada (formålsparagrafen). Waxay
kale oo soo bandhigtaa ujeeddooyinka sare
ee waxbarashada iyadoo halkan:
• lagu xoojiyo arrimaha la xiriira qiyamka,
dhaqanka iyo cilmiga uu ku salaysan
yahay dugsiga hoose-dhexe iyo sare.
Waxaa diyaariyey aqoonyahanno ka kala
socda dugsiyada hoose-dhexe iyo sare eewaddanka, waxaana isku soo duway oo soo
saaray wasaaradda waxbarashada .
• Mabaadi’da qodobbaysan: Qodobbo si
kooban oo sahlan loo qoray oo xoojinaya
• Maaddooyinka iyo tirade saacadaha
maaddo walba, barnaamijka maaddo walba
ee dugsiyada hoose-dhexe iyo sare.macallinku waxaa uu wax ku
diyaarinayaa asagoo tixgelinaya xeerarka
iyo ujeeddooyinka ku sugan manhajka
guud, kan maaddada ee sannadeedka ama
lix-biloodka ah, barnaamij saacadeedka
iwm. Waxaa ay doodi ka taagan tahay sida
uu macallinku isu waafajinayo (haddii ay u
suurowdo) ujeeddooyinka kore ee manhajka
iyo shaqada dhabta ah ee waxbarista taasoo,
sida aynu kor ku xusnay, marwalba ku xiran
qodobbada kale ee waxbarista oo ay ka mid
yihiin xaaladaha iyo duruufta gaarka ah ee
ardayga, goobta iyo maamulka iskuulka.Ujeeddooyinka sare ee iskuulka
(waxaa dajiya golaha shacabka (Stortinget))Manhajka
(Waxaa dajiya dawladda ama golaha shacabka)
(Waxa (maaddo)-ahaan la
(Qaababka, qaabaynta iyo
(Sababaynta waxa la
baranayo iyo)Manhaj-hoosaadka iskuulka
Maxay? Sidee? Waayo?Barnaamijka macallinka ee waxbarista
Maxay? Sidee? Waayo?Waxbarashada dhab-ahaan dhacda
Ardayda Kafaalo Schools Cadaado oo kujira labka
photo caruuse/kafaalo8kafaalo magazine 2013Shax 2 Sawirku waxaa kale oo uu tusayaa saddexda su’aalood ee aasaaska u ah cilmiga waxbarista oo ku
kala jira saddexda heer ee barnaamijka waxbarista. 
gunn imsen (1999:33)waxbarashada«Manhajyada
dunida waxaa ka
dhaxeeya inay yihiin
nidaam ay dowladi
wax ku hogaamiso,
hagid iyo talosiin
wargelin arday &
waalid»Cawil C. AxmedNuxurka:Manhaj Waxbarasho waa: isku day in la
gudbiyo mabaadi’da iyo tilmaamaha ugu
muhiimsan ee barnaamij waxbarasho
taasoo lala tiigsan karo baaris furan isla
markaasna ay suuragasho in lagu fuliyo
qaab tayo leh.
Shan waji oo manhaj lahaan karo:
1. Manhaj mabda’eed
2. Manhaj rasmi ah
3. Manhaj la fahmay
4. Manhaj la fuliyay
5. Manhaj la dareemay
Macalinku wuxuu waxbaristiisa kudhisayaa tixgelin uu siinayo xeerarka iyo
ujeedooyinka sugan ee manhajka guud,
kan maadada iyo barnaamuj saacadeedka.Gabar yar oo waxbarasho kujirta.
photo istockphoto/thinkstockkafaalo magazine 20139quraanka & sayniskaSamadu Tiirar
Waxaan ognahay in Islaamku kutaagan yahay shan tiir. Sidoo
kale macquul ma tahay in Quraanka iyo cilmiga saynisku isku
raacsan yihiin in samadu ku taagan tahay shan tiir?
dr. cabdullaahi xasan maxamud
phd in geology10kafaalo magazine 2013quraanka & sayniska
photo hemera/thinkstockLabadaas aayadood ee kor inooga muuqda
midi waxay kujirtaa suuratu-Racd
aayadda (2), midda kalana suuratulLuqmaan aayadda (10). Labaduba waxay
tilmaamayaan in Eebe samada kor yeelay
ama abuuray iyada oo aanan lahayn tiirar
aynu arki karno.
Haddaynu Quraanka dib u eegno waxaynu
ka helaynaa aayado badan oo si cad u
qeexaya in samadu tahay: (a) dhisme (b)
in ay leedahay saqaf oo ah halka dhismaha
caadiga oo aynu dhisano u saraysa ama qol
kasta oo dhisme ahaan dhamaystiran dusha
Aayadahan iyo qaar kale oo badan
waxaynu ka soo maydhaxtiri karnaa in
samadu dhisme tahay. Waxaynu marka
maqaalkan kaga hadlaynaa, madaama
dhisme kasta oo aynu naqaan leeyahay tiirar,
kor iyo hoos isu haya, bal hadda dhismaha
samadu in uu leeyahay tiirar iyo in kale.Dhinaca tafsiirka marka laga eego,
culimadii hore ee Islaamku labada aayadood
ee kor ka muuqda waa isku khilaafeen oo
waxay u kala jabeen laba qaybood:
 olo qabta in aan tiirar haba yaraatee
jirin ee Ilaah hayo.
 olo qabta in Ilaah hayo laakiin tiirar
aan la arki karin sabab uga dhigay.cilmiga iyo waxa uu ka qabo
Aqoonta maanta jiritaanka iyo kownka
loo leeyahay waxay si cad u muujinaysaa
in ay ka hawl galaan awoodo isheena ka
qarsoon ama aynaan arki karin laakiin ka
masuul ah jiritaanka isku xidhnaanta iyo
habsami u socodka wax kasta oo jira dhulka
iyo samada mid kasta ha ka jiree. Marka
awoodahaas la sii dhexgalo waxa loo kala
saaraa afar qaybood oo qabad, masaafo iyo
xoogba ku kala duwan. Hadaba, inta aynaan
u gudbin tiirarka samada waxaynu mid
mid u soo bandhigaynaa afarta awoodood
oo kownka ka hawlgala oo maanta aqoonta
fiican loo leeyahay.
Afartan awoodood saddex ka mid ahi
(strong nuclear force, weak atomic force
& electromagnetic force) sida aynu haddii
Alle idmo gadaal ka arki doono waxay si
toos ah uga hawl galaan waxa loo yaqaan
“Atom” gudihiis iyo meelo aan ka dheerayn
fiiri sawirka hoose. Tan afraadna waa tan
la yiraahdo “force of gravity/garvitationalkafaalo magazine 201311quraanka & sayniskaShax A Xuub caaro.photo thinkstockama ka mid noqday “Scientific Terminology”
afartan iyo dhawr sano ka hor. Awoodani
waxay lagama maarmaan u tahay dhismaha
asaasiga ah ee waxa “matter” loogu yeedho,
la’aanteedna haddaynu wax la fahmi karo
tusaale u soo qaadano dhagax is-haysta, bir
is-haysta iyo wax ka weyn toona suurtagal
ma noqodeen. Waxa xusid mudan in ay
Tani waa awoodda isku haysa qaybaha
tahay awoodda ay ku salaysan tahay
atomica (protons, neutrons) iyo kuwa
dhismaha iyo adeegsiga hubka la yiraahdo
iyaga dhaliya oo la yiraahdo “Quarks &
antiquarks”. Waa awoodda ugu xoogga
Awoodani haddii ay wax yar ka yaraan
badan kuwa la yaqaan oo kownka ka
lahayd sida ay tahay:
hawlgala laakiin waxay ku kooban tahay
Curiyayaasha noloshu ku dhisan tahay
atomka gudihiisa. Waxay kale oo ka
sida aynu u naqaan uma jireen (nololi
hawlgashaa qorraxaha waaweyn
gudohooda oo iyada ayaa ka
Hadday inta ay le’egtahay
masuul ah falgalada loo
xoogaa ka awood badnaan
yaqaan “nuclear fusion”.
ahaan waxaa la
lahayd, xiddigo ama
ogaaday samadu inay
qorraxo cimri dheeri
gudihiisa laga hadlo
fidaysey maalintii Alle
ma jireen (nololi ma
jirteen), waayo curiyaha
abuuray ilaa maanta,
haydrogen ma jireen (hal
lahaa “like charges
fidis la xawaare ah
mar buu guban lahaa),
rebel and unlike
sidaas darteedna biyo ma
charges attract”, waayo
Dr. Cabdullahi Spanish
sida sawirka ka muuqata
waxay isu haysaa “protons”
leh “positive +ve charge”
oo qaanuunkaas aynu xusnay
Awooddan labaad waxay sidii tii
inoo sheegayo in ay dabiici tahay in ay
hore ku kooban tahay atomka, waana
kala cararaan. Taas oo daliil u ah xoogeeda
awoodda ka masuulka ah waxa loo yaqaan
marka laga hadlayo masaafooyinka dhow.
“Radioactivity” oo aynu faa’iidooyinkeeda ka
Awoodani waxay ku gudubtaa ama
qaada “particles” aan la arki karin oo la
Ifka qorraxda ee nolosha dhulka korkiisu
yiraahdo “Gluon” kuwaas oo ku soo biiray
sida tooska ah ugu xidhan tahay. Waxa xusid
force”, taas oo iyadu dhowaanta aan awood
badan ku lahayn laakiin masaafooyinka
dhaadheer ah. Waana tan keliya oo la qabey
ilaa waqti aan sidaas u fogayn in ay keli ku
tahay oo miisanka wax kasta isu haya.«»12kafaalo magazine 2013Shax B Diilincaanoodyo waa weyn (Galaxis).mudan haddii awoodeedu inta ay tahay ka
badnaan lahayd waxay qorraxda ku dhalin
lahayd cimri degdeg oo waqti yar bay ku
Waxa loo adeegsadaa dhanka caafimaadka
(tusaale raajada) iwm.
Waxa lagu raadiyaa da’da dhagaxa,
dhulka, dayaxa iwm iyada oo la adegsanayo
Rb-Sr, U-Pb, Sm. Nd, K-Ar iwm. Waxa
kale oo lagu baadhaa da’ada waxa kasta oo
wax nool ka soo jeedey (laf, qori, gees, fool
iwm) iyada oo lo marayo habka loo yaqaan
Waxa Ilaah sabab uga dhigay kululaynta
dhulka si nololi uga jirto iyo socodka
qalbacyada dhulka “plate tectonics”, kuwaas
oo ay masuul ka yihiin “radio-active decay”
ku dhaca curiyeyaasha uranium (U), thorium
(Th) iyo potassium (K). Awoodan waxa
gudbinteeda ama socodkeeda ka masuul ah
“particles” lagu magacaabo “Bosons”.the electro-magnetic force
Tani waa awoodda isu haysa atomiska ay
wax kasta oo “matter” lagu tilmaami karaa
ka samaysan yihiin, iyada ayaana ka masuul
astaamaha u gaarka oo lagu dirsooco wax
kasta. Haddaan awoodani jirin kownku
wuxu ka koobnaan lahaa “atoms” aan mid
mid haysta lagu ogayn oo suurtagal ma
noqoteen jiritaanka waxa lagu magacaabo
“molecules” oo wax kastaaba ka samaysan
yihiin. Awoodani waxay ku gudubtaa oo
sida “particles” la yiraahdo “photons” oo ah
kuwa ifka oo kan qorraxduna ku jiro inaquraanka & sayniskaphoto thinkstocksoo gaadhsiiya. Waxay masuul ka tahay
dhamaan falgalada kownka ka dhaca iyo
fulitaanka habab badan oo cilmiga “Physics”
la xidhiidha. Awoodani waxay kale oo buddhige u tahay waxyaalo badan oo nolosheena
la xidhiidha sida: daawashada TV, shaqaynta
“computer” ka, gudbinta codka, shaqaynta
jidhka nafleyda. Waxa kale oo ku shaqeeya
“generators, induction motors, transformers”
iwm, waana ta ay isku jiheeya xayawaanka
hayaama oo qaaradaha isaga gudbaa.
Awoodani sidii labadi ka horreeyey kuma
koobna atomka ee gaadhitaankeedu xad
la yaqaan ma leh. Waxaynuna ku xidhi
karnaa gaadhiga aynu raacno iyada ayuu ku
shaqeeyaa, raadaarka ganaaxa inoo jara iyo
telefoonka gacanta iyada ayay adeegsadaan.the gravitational force
Waa awoodda ugu tamar yar afarta
awoodood oo dabiiciga ah marka laga
hadlayo masaafooyinka dhow. Laakiin waa
tan ugu tiigta dheer marka laga hadlayo
kownka iyo masaafooyinka loo yaqaan
“light years”. Haddii aynu nidhi saddexdii
awoodood ee hore waxay ku kooban yihiin
oo ka hawlgalaan atomka gudihiisa iyo
agtiisa, isla markaa aynu ognahay in wax
kasta oo samada inaga jira iyo dhulkuba
ay “atoms” isu tegey ka samaysan yihiin.
Awoodda jiidashada waxa culimada
aadka ugu xeeldheeri aaminsan yihiin in
ay tahay awoodda qorraxaha/xidigaha,
meerayaasha iyo dhamaan waxa samada
ku abuuran isu haysa. Awoodani waxay kuShax C Birlab iyo biinan.photo thinkstocklaftooda waxa ka muuqda dhisme sida
gudubtaa “particles” loo yaqaan “graviton”.
xuubka caarada isugu dhafan, isla markaana
Faaiidooyinka tooska inoo taaban kara
leh meelo la moodo in ay banaan yihiin.
wadar iyo waaxidba oo maalin walba taagan
haddaynu wax ka xusno: di’ista roobka,
Hadaba su’aasha imaanaysa waxa
barafka iyo wixii la mid ah. Dhulka waxa
weeye, haddii awoodda jidashadu
ku nool oo dhan iyada ayaa ku haysa.
foolaad u tahay afartan
Cuntada iyo cabitaanka iyada
awoodood oo maanta la
ayaa weelka inoogu xajisa,
ogyahay oo Ilaah tiirarka
biyaha dhulka ku haysa,
uga dhigay dhismaha
jawiga dhulka u haysa
samada. Laakiin aynu
in mar kasta oo
si kale oo ognahay
in awoodaasi xisaab
Haddaynu soo koobno
ay awoodda jiidashadu
ahaan la macne tahay
waxaynu odhan karnaa
marka laga hadlayo laba
afartan awoodood oo
walax oo is jiidanaya
aynu xusnay oo marka
(m1 iyo m2), tusaale
cufka iyo baaxadda aadka
qorraxda iyo dhulka à F =
u weyn laga hadlayo ay tan
G * m1 * m2 / r^2. Halka G =
u dambaysaa u muuqato in ay
gravitational constant, m1 = cufka
ugu muhiimsan tahay, laakiin aan
walaxa hore, m2= cufka walaxa labaad,
midna la’aanteed waxba jireen ayaa ugu
r^2 = laba jibaarka masaafada u dhexaysa
horreeya tiirraka qarsoon ama aynaan arki
labada walax. Waxa cad in mar kasta oo
karin oo samada haya ama lagu taagey. Qaar
masaafadu weynaato ay awoodda jiidashadu
kalena hoos baynu ku xusi, qaarna weli waa
yaraanayso. Tan kale waxaynu ka hadlaynaa
qarsoon yihiin oo climigu ma gaadhin baa
jiidasho ka dhexaysa walaxyo isu jira
masaafo lagu cabirayo (boqolaal, kumanyaal
iyo malaayiin…) “light years”. Hal “light
Sawirka inoo muuqda (A & B) waxa lagu
year” waa masaafada uu ifku socon karo
muujey cirku dhisme Ilaah si fiican isugu
hal sano. Kaas oo halkii ilbidhiqsi socda
xidhay yahay. Kan hore waa xuub caaro oo
culimada arrintam u dhuun daloola ayaa
ku cabbiray in samadu u dhisan tahay sida
Jiidashada oo aynu masaafada dhow
xuubka caarada qaarkiis. Kan labaad waa
sawir laga qaaday “Galaxis”, diilincaanoodyo awooddeeda kaga cabir qaadan karno
sawirka sare (C) oo ka kooban bir-lab iyo
aad u waaweyn aadna inooga fog. Iyaga«»kafaalo magazine 201313quraanka & sayniskaSawir muujinaya godka madow «The black hole». “clips”, laakiin ay muuqato in bir-labkaas
yari dhulka jiidashadiisa uga awood roon
yahay birahaas yar yar oo waraaqaha
lagu xejiyo. Waxa marka suaashii noqotay
haddii awoodda jiidashadu sidaas tahay,
suurtagal ma tahay in ay isu hayso xiddigo
iyo diilincaanoodyo iyo waxyaalo la mid ah
oo masaafada u dhexaysa cabbirkeedu yahay
(millions to billions of light years)?
Taas oo taagan, ayaa waxa iyana meeshii
soo gashay oo la ogaadey in samadu ilaa
maalintii Ilaah sameeyay ay fidaysey sida
aayadda inoo muuqata ee surat-Daariyaat,
Eebbe inoogu sheegay, waxaana la ogaadey
in fidistaasi ku socoto xawliga ifka mid u
dhigma. Taasina waxay sii yaraysay kaalintii
jiidashada.Maqaal hore (Fe- xadiidka) waxaynu ku
sheegnay in kownka waxa ku abuuran,
beni-aadanka iyo qalabkiisa casriga ah
arki karaan oo keliya wax aan ka badnayn
2%. Waxa kale oo culimadu si dadban u14kafaalo magazine 2013photo thinkstockdareemeen in 98% ka soo hadhay ay ka
kooban tahay ogaalka maanta iyo aqoontu
halka ay joogto, laba abuurood oo kale oo
la kala yiraahdo “Darka Matter & Dark
Hadaba, baadhitaanadii u dambeeyey
waxay sheegayaan in “dark matter”
ay tahay xadhkaha ama xabagta
isu haysa oo ka masuul ka ah 90%
jiidashada diilincaanoodyada iyo ururada
diilincaanoodyada (Galaxis & galatic
clusters) aadka u waaweyn aadkana u kala
fog. Sidaas darteedna ay tahay awoodda u
weyn oo kownka isu haysa. Isla markaana
“dark energy” ay tahay inta la ogyahay
awoodda fidista kownka Ilaah sababta uga
Labada ayaadood oo aynu hordhaca
ku soo aragnay ka sokow samadu in ay
dhisme tahay aad bay Quraanka ugu soo
noqnoqotay (Al-Baqara/22, Al-Anbiyaa/32,
Ad-Duur/5, An-Naazicaat/27, AshShamis/5). Maqaalkan kooban waxaynu ugu
talo galay mar haddii samadu dhisme tahay
in aynu ku dulmarno tiirarka dhismahasamada isu haya oo ay weliba caddahay
in aynaan awood aynu ku aragno lahayn
oo layna siin. Hadaba, tiirarku inta hadda
cilmigu ogyahay waa shan (strong nuclear
force, weak atomic force, electromagnetic
force, garvitational force & dark matter).
Waxa marka muuqata in Quraanka iyo
cilmigu isku waafaqsan yihiin in samadu
dhisme tahay, isla markaana lagu taagey
tiirar aynaan arki karin. Waxa intaa raaca oo
aynu iyana odhan karnaa cilmigu Quraanka
waa ku waafaqsan yahay fidista samada
ama kownka oo Ilaah ballan qaaday in uu
Laga bilaabo 1990-nadii waxa culimada
arrimahan ku xeeldheeri meel isla dhigeen
in awoodda fidista kownka u xilsaarani inta
hadda la ogyahay tahay abuurta loo bixiyey
“darka energy” oo qiyaasta 73% jiritaanka
la arki karo ama si dadban loo dareemi
karaa ka kooban yahay. Marka suaasha leh
samadu tiirar ma leedahay waxaynu kaga
jawaabi haa, laakiin waa laynaka qariyey
oo ma arki karno sida labada aayadood oo
tiirarka samada ka hadlayaba ku cad.quraanka & sayniska
KM à Nuxurkaela
y, iyada ooSawir muujinaya
photo thinkstockada kor ye
Ilaahay wuxuu sam
nu arki karin.
ar force waa
 he strong nucle
kuwa iyaga dhaiyo
rks & antiquarks”.
liya oo la yir
xo ga badan kown
Waa awoodda ugu
force waxay ka
 he weak atomic
a, waana awood ka
ivity’, ifka qoraxda,
masuul ah ‘Radioact
iwm, waxaa lagu ba
netic force waa
 he electro-mag
awood isku haysa
suul ka tahay isla
, waxayna asaas
u tahay shaqaynta
l force waa awoodd
 he gravitationa
kin dhulka wa
ugu tabarta yar, laa
sabab u ah, cuntada
a weelka inoogu
xajisa, di’ista roobk
rk Energy waa
 ark Matter & Da
uga dhigay fidinta
oban tahay xargo
kownka. Waxay ka ko
oo ka masuul ka ah
ama xabag isu
90% jiidashada dii
cilmigu ogyahay ee
 iirarku inta hadda
antaas kor kuxusan
u soa masaafada uu ifk
• Hal «light year» wa
as oo halki
con karo hal sano. Ka
socda 299792458 mkafaalo magazine 201315os
otsocial psychologyHubaashii waa la caroon, laakin waxaa la isku dhaafay xakameyntaCarada Saameynteeda
& XakameynteedaCaradu waxay burburisaa mustaqbal qof, qoysas, bulsho, qaran ama dunida oo dhan.
Hadana waa dareen Ilaah ku abuuray bini’aadamka, laakin lagu yiri xakamee, hadii aad rabto
badbaadadaada. Waxayna leedahay qaab loo xakameeyo.
dr. saadiq maxamed axmed (enow)
dhakhtarJirka aadamiga waa hilib, lafo iyo dareere.
Waxaa weheliya harag dusha kaga awdan
oo isku haya xubnihiisa, kana difaaca
shiddooyinka dibadda. Gudaha jirkaas
waxaa ka jira maamul leh hannaan
dowladeed oo aanan oggoleyn in uu
khalal ku yimaado. Hannaanka hagaajiya
cimilada gudaha waxaa la yiraahdaa
Human Homeostasis. Waxaan shaki ku16kafaalo magazine 2013jirin dhacdooyinka dibadda ka dhacay
iyo ogaallada aanu heleyno in ay raad ku
yeelanayaan gudaha jirka. Hannaankan
aanu soo xusney wuxuu ka shaqeeyaa in
uu yareeyo raadka uu gudaha jirkeena ku
yeelanayo is-beddelkaas dibadda ka dhacay.
Si xubnaha gudaha ah ay cimilo hagaagsan
ugu wataan howlahooda joogtada ah.
Caradu waxay kamid tahay ogaalladajirka ku soo kordha oo wax ka beddela
cimiladeeda gudaha ah. Sida qaalibka ah
waxay wadataa fal-celiskeeda uu weheliyo
dhib iyo shiddo. Misana waxaa jira
faa´iidooyin ay qofka u leedahay. Waxay
qofka ka soo saartaa oo dibadda ay soo
dhigtaa ogaallo uu hoosta ku-watey oo
ku hayay lahan iyo kuleyl. Markaas ayaa
sidii ciid la dhalan-rogey waxaa is-beddelsocial psychology«Qofka markuu
caroodo indhihiisu waa
xididdadiisuna waa ay soo
fuurayaan. Waxaasina waa
kuleylka ku soo kordhaya
cimilada gudaha oo dhiigwareeggu ugu hilan culus
yahay.»Dr. Saadiq Eenow.ku dhacayaa xaalad uu ku sugnaa qofka
caroodey iyo xiriir uu la-lahaa xubnaha
kamid ah bulshada ee ku hareereysan.
Markaas ayaa caradii waxay dhistaa
kaabad lagaga tallaabsado hog u dhexeeyey
labada qof ee isu caroodey. Caradu waxay
gudaha qofka ku keentaa kuleyl lamid
ah midka ay biyuhu ku karkaraan ee
ruxanka iyo rogmadka leh. Qofka markuu
caroodo indhihiisu waa ay guduudanayaan,
xididdadiisuna waa ay soo fuurayaan.
Waxaasina waa kuleylka ku soo kordhaya
cimilada gudaha oo dhiig-wareeggu ugu
hilan culus yahay.
Casrigan la hor u-marey waxaa jira arimo
weheliya nolosha reer magaalowdey oo
kordhiyey carada iyo fal-celisyadeeda burburka keena. Arintaas waxay aafooyin ku
keentey degmooyin dhaqnaa iyo ummadu
dhisnaa. Tilmaamaha foosha xun oo nolosha
ku sii kordhaya, kuwaas oo aadamiga ku
dhex-abuuraya in ay kala caroodaan waxaa
kamid ah xaasidnimada, been-abuurka,
kala-hinnaaska, xumaan isku-sameynta iyo
ku tartanka dhaldhalaalka nolosha. Markaas
ayaa caradii waxay u muuqatey mashaariic
lagu doono hanti. Taasi waxay khasbeysaa in
la fahmo carada, si ayan gar-wadeen inoogu
Caradu waa dareen caadi ah oo qof walba
uu la kulmayo noloshiisa. Waxay markhaati
u tahay in qofka caroodey uu yahay aadami,
xagga Eebe (kor ahaaye) ka heley mudnaan
oo aanan oggoleyn in la xaqiro, la ihaaneeyo
ama loo geysto dhac iyo dhaawac. Waxay
kamid tahay arimaha lagu bidhaansado
tayada ay leedahay nolosha qofka oo qof
wuxuu ka caroodo mid kale waa uu u dulqaataa. Caradu waxaa kaloo ay bidhaan u
tahay caafimaad-qabka caadifadda qofka.
Waa xuduudda u dhexeysa waxa uu qofku
doonayo iyo waxa uu diidan tahay.noocyada dadka carooda
Dadku markii ay caroodaan, waxay u
qeybsamaan saddex jaad. Dadka qaarkood
carada ayaa xuduudda kala baxda. Markaas
ayay xad-gudub dheeri ah la yimaadaan, siWaxyaalaha kaciya carada.lahankii ay caradu ku heysey uu u qaboojiyo.
Dadkaasi waxay ku kacaan falal denbi
ah iyo in ay ku xad-gudbaan xeerarka
aadaminimo. Waxaa kaloo jira qeyb aanan
damiir laheyn, kuwaas oo aanan caroon si
kasta oo loo xumeeyo. Kuwaasi waa dad
xanuunsan oo ka dhacsan aadaminimada.
Qeybta saddexaad waxay u dhexeeyaan
labada qeybood ee hore. Waa dadka
caradooda ku dhisa garsoor. Waa dad aanan
khaladka qaadan, iyaguna aanan dadka
khalad kula kicin.
Caradu waa dareen fal-celis ah oo lagaphoto thinkstockakhrisanayo is-beddel ka muuqanaya qofka
korkiisa. Waxaa raad ku leh is-beddel
ka dhaca cimilada gudaha ah ee jirka.
Danqasho dibadda kaga timaadda ayaa
waxaa ka turjumaya xaaladda nafsadeed
ee gudaha ah. Markaas ayaa jirkii qofka
wuxuu ka jawaabayaa arinkaas. Astaamaha
ay caradu leedahay ee ka muuqanaya jirka
dibadda ah waxaa kamid ah ilkaha oo leysku
xoqo, sacabada oo leysku qabto, dareenka oo
kordha, dhidid oo yimaada, kuleyka jirka oo
kordha, xaalad walwal ah oo qofku gelayo,
ereyada ka soo baxaya qofka, codkiisa iyokafaalo magazine 201317social psychology«Xilligaas uu qofku careysan yahay, gudaha jirkiisa waxaa kordhaya
wadne garaaca, waxaa kordhaya sonkorta jirka, waxaa kordhaya dhiigwareegga, waxaa kordhaya qaabilaadda dhiigga in uu xinjiroobo.»
Dr. Saadiq Eenow.anshaxiisuba waa ay is-beddelayaan. Maraka
qaar waxay gaarsiisaa qofkeedu in uu sidii
qof indhala´ oo kale u dhaqmo.ilaha ay katimaado caradu
Aqoonyahan u dhashay dalka Mareekanka
ayaa sanadkii 1975-kii wuxuu soo
bandhigey aragti uu carada kaga
sheekeynayo. Ninkaasi oo la yiraahdo
Reymond Novaco aqoontiisu waxay ahayd
barashada cimilo-bulshadeedka (Socialecology), wuxuu macallin ka ahaa University
California Irvine. Wuxuu aragtidiisaas ku
sheegey in caradu ay ka taagan tahay saddex
nooc. Mid ogaal
ah (Cognitive), waxay ka timaaddaa
jirka gudihiisa. Mid caadifi ah (Tension &
Agitation), waxay ka timaaddaa fal dibadda
ka dhacay ka-ficil qaadashadiis. Mid
anshax ah (Behavioral) ayaa jirta oo waxay
ka timaaddaa dhaqan caro ah oo qofka
abuurkiisa weheliya.Novaco, Raymond (1986).
«Anger as a clinical and social problem».
(New York: Academic Press.) Jirka marka uu caroonayo waxaa
danqinaya qof, ficil ama walax. Waxaa jira
dareen jirka gudihiisa ku rakiban oo ka
jawaaba qaabkii uu jirka ula fal-geli lahaa
ficilka carada. Laba hannaan ayaa waxay
yihiin kuwa ka masuulka ah jawaabta soo
celiska ah oo jirku uu kaga jawaabayo
carada. Iyagu waxay kala yihiin hannaanka
dareen-sidaha (Central Nervous System) iyo
hannaanka dheecaan-qubaha ah (Hormone
Regulation). Fal-celisku waa mid dadku ay
ku kala duwan yihiin. Hal-beegga farqiga u
dhexeeya wuxuu la xiriiraa da´da, dhaqanka,
iyo jinsiga (lab iyo dheddig). Cimilada qofku
ku nool yahay qudheedu waxay raad ku18kafaalo magazine 2013caroodaa markii uu qof khaldan uu soo
leedahay kicinta carada.
dhex-galo arin aanan isaga khuseyn ee adiga
Tijaabooyin lagu sameeyey caruuraha
ku khuseysa. Marar ayaa carada waxaa
da´doodu yar-yar tahay ee Shiinaha iyo
dhaliya qofka caroodey oo is leh caradaada
kuwa Mareekanka ayaa waxaa lagu soo
arin ayay saxeysaa. Marar kale qofku
bandhigey in hal-beegga caradoodu ayan
wuxuu ka caroodaa ficil uusan ka caroodeen
isku-mid ahayn. Tijaabo lagaga careysiinayo
haddii uu isagu ahaan lahaa midka falkaas
caruurtaas yar-yar ayaa ogaallada laga
ururshey waxaa ka soo baxay, farqiga weyn
Waxaa kaloo la ogaadey, carada dumarka
ee u dhexeeya hal-beegga carada ee labada
in ay ka badan tahay midda ragga. Badanaa
qowmiyadood. Caruuraha Shiinaha ayaa
carada dumarka waxaa kiciya dadka ku
xaalad kasta oo ay ku jiraan waxay ku
hareereysan ee qaraabada la ah.
sugan yihiin in ay yihiin kuwo
Halka carada ragga, sida
deggan oo caradu ku yarqaalibka ah ay sababa
tahay. Iyaga oo sariirta
u tahay dad ka dheer
saaran, soona jeeda
oo aanan qaraabo la
ayaa maro wejiga
ahayn. Waxaa kaloo
laga saarey. Caruurta
- Wax barta, oo fududeeya
dumarku ay caan ku
Shiinaha, si tartiib
oo ha adkeynina. Haddaad
yihiin in caradoodu
ah ayay maradii
carootona aamus, oo
ay si tartiib ah u soo
kaceyso, halka carada
haddaad carooto aamus oo
ragga ay mar qura
dhiggeeda ahayd oo
haddaad carooto aamus.
qarxeyso oo ay gaarto
Dr. Saadiq Eenow.
meeshii ugu danbeysey.
laga qaadey, waxaa
Caruurta ayaa iyagu
muuqatey in falwaxay leeyihiin sabab ay ka
celiskoodu ahaa in ay si
mideysan yihiin oo caradooda
xooggan maradii isaga qaadeen.
kicisa. Waxay tahay yool ay ku socdeen
Caradu maahan mid raadkeeda laga
garto kuleylka ama qabowga qofka caroodey. oo laga hor-joogsado. Kicinta carada waxaa
kaloo ay la xiriirtaa xaaladda maskaxda iyo
Bal waxay leedahay jahooyin kale oo lagu
fasiraadda ay ku sameyso qiimeynta waxa
helo xooggeeda. Waxaa kamid ah meesha
ay caradu ka dhacdey (locus), fal-celiska
(reaction), qaabka fal-celiska (modality),
xoogga fal-celiska (impulsivity) iyo yoolka
natiijooyinka caradu kudhamaato
(objective). Xiriir kasta oo ka dhexeeya
Caradu waxay leedahay laba natiijo oo
arimahaas aanu soo xusney waxay xoog ku
midkood ay ku dhamaato. Waxay yihiin ama
kordhin-kartaa carada qofka. Arimaha ugu
weerar uu qofka careysani qaado ama in uu
badan oo dadku ay ka caroodaan waxaa
ka baxsado wixii ka careysiiyey. Xilligaas uu
kamid ah in ay xumaan kaga timaaddo qof
qofku careysan yahay, gudaha jirkiisa waxaa
kale. Weliba caradu waxay sii xooggan tahay
kordhaya wadne garaaca, waxaa kordhaya
markii qofkaasi uu yahay qof aad adigu
sonkorta jirka, waxaa kordhaya dhiighorey u wanaajisey, welina aad wanaaggiisa
wareegga, waxaa kordhaya qaabilaadda
ka shaqeeneysid. Sidoo kale waxaa laga
dhiigga in uu xinjiroobo, waxaa kordhaya«»social psychology
photo thinkstockkafaalo magazine 201319social psychology
hormoonka carada (Adrenalin). Howlahaas
oo dhan waxay yihiin diyaargarow uu
jirku ku helayo xooggii uu ku dagaal-geli
lahaa ama ku baxsan lahaa. Is-beddelkaas
xooggan oo ku dhacaya cimilada gudaha
jirka, ayaa wuxuu yahay midka shiddada
keenaya. Caradu waxay markaas dhaawac u
geysaneysaa qofka caroodey naftiisii, jirkiisii
Dhaawaca ay caradu u geysato nafta
waxay tahay, qofka carada badan waxaa ku
yaraanaya awoodda hal haleelka iyo itaalka
fekerka. Wuxuu u iilanayaa in uu wax burburiyo in ka badan iilashadiisa wax-dhis.
Ugu danbeynta carada waxay u noqoneysaa
caado oo mar walba qalbigiisa waxaa
ka curanaya gufaacooyin u
muhoonaya in uu caroodo.
Sidaas si lamid ah ayay
caradu u dhaawacdaa
photo thinkstock20kafaalo magazine 2013xididdada dhamaan waxay la fuurayaan
cadaadiskii dhiigga. Waxaa dhaawacmaya
xididdada yar-yar. Gaar ahaan kuwa
muhimka ah ee wadnaha quudiya. Arintaas
ayaa waxay sabab u noqotaa in dadku ay u
dhintaan carada. Qofka carada badan waxaa
ka xumaada anshaxa oo ma uu lahan dad la
dhaqan. Ficil walba oo hortiisa ka dhacaya
wuxuu ka raadinayaa wax uu ka caroodo,
isaga oo arintaas daawo uga dhigaya
xanuunka ay caradu ku heyso. Markaas
ayaa dadku kahanayaan, isaguna kahanayaa
dadka. Aqoonyahannadu waxay tilmaameen
caafimaadka ku jira marka ay caradu yar-tahay. Waxay sheegeen in qofkaasi ay u
hagaagsan tahay cimiladii gudaha ee jirkiisa.
Taasi waxay xasillooni u keentaa xubnaha
gudaha iyo shaqadooda.daawooyinka carada
Aadamigu wuxuu isku howley in uu helo
arimo lagu maareeyo carada, si loo debciyo
lurka ay ku heyso qofka. Aqoonyahannadii
u kuur-galey arintaan waxay maareyntii
ku soo koobeen laba arimood. Waxay kala
yihiin nafta oo la edbiyo, in laga fogaado
waxyaabaha carada keena. Diinta Islaamka
oo wax walba oo aadamiga nafac u leh ayan
sheegiddeeda ka tegin, ayaa wax walba oo
aadamiga lur ku haya dawadeedana ayan ka
tegin. Adeegihii Eebe suubanaa Maxamad
ahaa (shacni iyo nabadgelyo dushiisa
ha ahaatee) wuxuu inoo tilmaamey
cinwaan weyn oo uu inagu
barayo carada. Waxay ahayd
in dadka kan u xoogga
weyn uu yahay kan
naftiisa legda marka uu
ah oo xanuunka
carada lagu daweeyo.social psychology
Dawada koowaad waxay tahay , marka la
careysan yahay in la aamuso oo aanan la
hadlin. Ooraah uu warinayo Ibnu Cabaas,
run sheegihii aanu rumeyney risaaladiisa,
adeegihii Eebe ee suubanaa (shacni iyo
nabadgelyo dushiisa ha ahaatee), wuxuu yiri: «Adeegihii Eebe wuxuu yiri: Wax barta,
oo fududeeya oo ha adkeynina. Haddaad
carootona aamus, oo haddaad carooto aamus
oo haddaad carooto aamus».
Ujeeddadu waxay tahay in caradii aanan
ficil la raacin. Waayo haddii ay taasi dhacdo
waxaa hur iyo kul ku kordhayaa jirkii
gudaha ka gubanayay. Waxaa xigaya shiddo
culeyskeeda aanay ku ekeyn qofka caroodey
iyo kan loo caroodey oo keliya. Bal u
gudbeysa bulshada ay ku dhaqan yihiin iyo
dadka ku gadaafan.
Dawada labaad waxay tahay in qofka uu
beddelo xaaladda joogsi ama fadhi oo uu ku
sugan yahay. Waxaa jira ooraah uu suubane
Maxamad (sh.n.d.a.) sheegey, taas oo uu ka
tebinayo saaxiibkiis Abaa Thar Al-Qafaari.
Ooraahdu waxay ahayd sidan:«Haddii uu midkiin caroodo isaga oo
taagan, ha fariisto. Haddii caradu ay ka tegi
weyso ha is-legdo».Is-beddelka xaaladda joogsiga iyo
fadhiga, waxaa isku beddelaya kororka
labada hormoon ee kala ah Adrenalin
iyo Noradrenalin. Labadaas hormoon oo
labaduba ay ka yimaadaan qanjirka kelyaha
korkooda saaran (Adrenal Glands) ayaa
waxay leeyihiin tilmaan ah in ay danqiyaan
unugyada dareenka (neurotransmitters).
Hormoonka Adrenalin wuxuu soo qubtaa
marka ay xaaladdu adag-tahay sida
xaaladaha cabsida iyo carada. Waxaa
markaas qofkii ku kordhaya wal-walka,
wadne garaaca, heer-kulka jirka, heerka
sokorta ee dhiigga, iyo cadaadiska dhiigwareegga. Sidaa darteed dadka dhiigkarka qaba ama sonkorta, waxaa lagula
taliyaa in ayan caroon. Waayo waxay ku
keeni kartaa wadnaha oo joogsada (Heart
Attack) ama maskaxda oo dhiig ku furmo
(Stroke). Hormoonka Noradrenalin wuxuu
la shaqeeyaa nasashada iyo xasilloonida.
Marka ay is-beddesho xaaladda qofka ee ah
joogsiga iyo fadhiga, hormoonkan wuxuu
kordhayaa shan jibbaar. Waxaa halkaas
ku cad, run-badanihii aynu risaaladiisa
rumeyney, rasuulkeenii suubanaa (sh.n.d.a.)
in uu run ku sheegey ooraahdiisii dawada
labaad ahayd ee carada.
Dawada saddexaad ayaa iyana waxay
tahay in marka la caroodo, inta biyo la
qaato la weeseysto. Ooraah da dawadaas
xambaarsan waxay tahay, ereyadii laga
dhaxley adeegihii Eebe ee suubanaa (shacni
iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee), kuwaas
oo ahaa:«Caradu waxay ka timid sheydaan,
shedaankuna waxaa laga uumey dab,
dabkuna biyo ayaa damiya. Haddaba
haddii uu qofkiin caroodo, ha
weeseysto».Sunan Abuu Daa´uud
4784, Axmad 4 / 226. Ooraahdan dhab ahaanteeda
waxaa ka markhaati kacaya aqoonta
Ifka Haalo, taas oo soo bandhigtey
sawir laga akhrisan karo raadka
ay biyaha weesadu ku yeelanayaan
qaboojinta cimiladii kululeyd ee
jirka gudihiisa ahayd. Isbeddellada
midabyada haalo ayaa waxay
muujiyaan weesada laga danbeysiiyo
carada, in midabyadu ay ku
noqonayaan sidii ay ahaayeen markii
uu qofku caadiga ahaa. Qofkii Eebe
ku anfacayo tusaale ugu filan inaana
la caroon oo weliba wax been ah aan
loo caroon, si jirka iyo bulshadu inoogu
• Human Homeostasis waa hanaan ka ilaaliya dareenada dibada inay raad ku yeeshaan gudaha jirkeena.
• Caradu waxay kamid tahay dareenada jirka uga
yimaada dibadda, waxayna gudaha qofka ku
samaysaa kuleyl lamid ah midka ay biyuhu isla
rogrogaan oo kale.
• Habdhaqanada caradu kadhalato oo foosha xun
waxaa kamida: xaasidnimada, been-abuurka,
kala-hinnaaska, xumaan isku sameynta iyo ku
tartamidda dhaldhalaalka dunida.
• Dareenka carada wuxuu ka marag kacayaa in qofka
carooday uu yahay insaan, waxayna kamid tahay
arimaha lagu bidhaansado tayada qofka noloshiisa
waxa uu ka carooday iyo wuxuusan ka caroon.
• Falceliska dareenka carada waxaa saameyn
kuleh da'da dhaqanka, jinsiga iyo cimilada qofku
kudhex nool yahay.
• Dumarka caradoodu si tartiiba ayay usoo kacdaa, waxaa inta badan kiciya qaraabadeeda
• Carada ragga mar qura ayay qaraxdaa, waxaana
kiciya dad ka fog.
• Natiijada caradu ku dhamaataa
» Weerar uu qofka careysani qaaday
 axsad inuu yahay
Dadka carooda u qaybsamaan 3-nooc
1) Xuduuda ayay kala ayay baxdaa
2) Dad caradooda kudhisa garsoor
3) Kuwo aan damiir caro laheyn
Calaamada lagu garto muuqaalka carada
Dhidid badan, kordhid kuleylka jirka, isbedelka
codka, isticmaalka erayada
ilkaha oo la isku garaaco, sacabada oo la isku
qabto, dareenka oo kordha
Caradu waxay ka timaadaa sedex ilood Reymond Novaco:
1) Mid ogaal - jirka gudihiisa
2) Mid caadifi - falcelis dibadda
3) Mid anshax - qofkaa kudhashay sidaa
Xoogga carada waxaa lagu cabiraa:
1) Meesha ay caradu kadhacday (locus)
2) Falceliska (reaction)
3) Qaabka falceliska (modality)
4) Xoogga falceliska (impulsivity)
5) Ujeedka (objective)
Caradu waxay dhaawac u geysan qofka
carooday naftiisii, jirkiisi iyo anshaxiisi
a) Awoodda wax haleelidda iyo iitaalka fakarka
qofku xoog u weecan
b)Kor u qaadaa cadaadiska dhiig-wareega
c) Qofka waxaa ka xumaada anshaxa oo malaha
dad la dhaqan
1) Markii la caroodo, in la aamuso
 ofku inuu bedalo xaaladda uu ku sugan yahay
(fadhi, istaag iwm)
3) In la weysaystokafaalo magazine 201321taariikh & diintaTaalada Ibnu Sinaa magaalada Doshanbeh, dalka Taajikistan.Culimadii Islaamka & Cilmigii ay dunida uga tageenIbnu SiinaaIbnu Siinaa dunida wuxuu dunida uga tagey dhaxal cilmiyaad ilaa manta
lagu liibaanay, wuxuu qoray in kabadan 450 buug, waxaa ka badbaaday 250.
Sidee 57-sano gudohood intaas ugu qabtay?
dhakhtarkoriinkiisi & mad-habtii aabihii
Ibnu-Siinaa, wuxuu magaciisu ahaa Abuu
Cali Al-Xuseyn bin Cabdullaahi. Wuxuu
kamid yahay ragga ku hanaqaadey aqoonta
iyo hal-abuurka oo taariikhda aadamiga lagu
xushmeeyo. Gaar ahaa wuxuu kamid yahay
aqoonyahannada u kacay muslimiinta, xilligii
baraarugga nololeed iyo casrigii dahabiga
ahaa ay ku sugnaayeen dadka muslimka ah.
Waa caalim diineed, filosoof, dabiicad yaqaan,
cir-barad, xisaabyahan, suugaanyahan,
iyo takhtar. Wuxuu tusaale u yahay ragga
nasiibku saacidey oo dadaalka ku heley
hibooyinka kala duwan. Waa shakhsiyad lagu
faano wax-qabadkiisii, taas oo aadamigu
uu mahadiyey. Ogaallda laga hayo taariikhnololeedkiisii waa ay yar-yihiin. Waa ogaallo
kooban oo ay ka qoreen ardeydiisii.
Isagu wuxuu ku dhashey Afshona oo
ah tuulo ka tirsan degmada Bukhaara
(Uzbekistan). Wuxuu noolaa muddadii u
dhexeysey 980 -1037. Xilligiisii waxaa loo
yiqiin shiikhii madax-weynaha ahaa. Reer
galbeedkuna waxay u yaqaaniin boqorkii
takhaatiirta. Wuxuu qorey buugaag ka
badan 400 oo aqoonta funuunteeda kala
duwan ah. Wax badan ayaa ka lumey, tiro
200 ah ayaa hadda laga hayaa. Yaraantiisii22kafaalo magazine 2013waxaa wax barey aabihiis oo ahaa nin
kasta oo uusan qaadan mad-habtii aabihiis,
raacsan culimada mad-habta Ismaaciiliyada.
misana wuxuu si xooggan uga faa´iideystey
Waa mad-hab ay rumeysan yihiin koox
dooddii badneyd oo aqalkooda ku dhexshiicada kamid ah oo qaatey diin lagu
mari jirtey culimadii iyo aqoonyahannadii
barxey aragtiyaal uu ka tegey filosofkii
badneyd ee soo booqanayay aabihiis.
Giriigga ahaa Aflaadoon. Waxaa kaloo
jiray nin ahaa walaalkiis ka weyn oo sida
Macalimiintiisi & Barashada
aabihiis qaatey mad-habta Ismaaciiliyada.
Laakiin sida laga hayo qoraal uu ka tegey
Toban jirkiisii wuxuu si fiican dusha uga
Ibnu Siinaa, isagu ma uusan qaadan
qeybey Quraanka. Dabadeed wuxuu
mad-habtaas. Qoraalkaas ayaa
markiiba guda-galey in uu
wuxuu ku sheegayaa sidaan:
barto suugaanta, fiqhiga,
«Anigu waan dhegeysan
iyo caafimaadka. Waxaa
jiray, waana aan haleeli
rumeysnahay waa mid
kaloo uu yiqiiney suugaan
jiray waxay sheegayaan.
badan iyo sheekooyin
ay dadku iska dhaxlimarna ma uusan
Haddiise aan sidaan
jireen. Aqoontaas uu
ahay gaal ku ahay,
yaraanta ku heley waxay
Marka uu dhalanayey
adduunka qof muslim gaarsiisey in uu xiiso u
Ibnu Siina, aabihiis wuxuu
ah ma jiro.
qaado barashada iyo raadinta
guddoomiye gobol u ahaa
ragga aqoonyahannada ah.
Aqoonta uu xiisaha gaarka ah u
Samaniida ee ka talin jirtey
qaadey waxay ahayd aqoonta caafimaadka
gobollada Aasiyada Dhexe. Xilka uu
(Takhtarnimada). Isaga oo wiil yar ah
hayay ka-sokow, odeyga Ibnu Siina dhalay
ayuu bilaabey in uu ku fogaado akhriska
wuxuu ahaa nin xushmad weyn ku lahaa
kutubada aqoonta caafimaadka. Islabulshada, gaar ahaan culimadii mad-habta
markaas wuxuu wakhti badan ag fadhiyi
Ismaaciiliyada. Yaraantiisii Ibnu Siina, in-«»taariikh & diinta
jiray culimada ku xeel-dheer aqoonta
caafimaadka. Isaga oo da´diisu ay tahay
16-jir, ragga uu dugsigooda wax ku bartey
waxaa kamid ahaa Ibnu Sahal Al-Museymi
iyo Abu Al-Masnsuur Al-Xasan Al-Qamari.
Macalinkiisii ugu horeeyey ee uu ka
barto aqoonta falsafadda iyo suuragalka
(Logic) wuxuu ahaa Cabdullaahi Al-Naa´ili.
Isaga oo 18 jir ah ayuu ka tegey, kadib
markii uu gaarey heer uu ku fahmo in uu la
aqoon yahay dadka waaweyn ee ku dhaqan
degmadii uu joogey. Wuxuu markaas u
banbaxay in uu isagu wax is-baro oo uu
ku fogaado akhriska. Isaga oo arinkaas ka
sheekeynaya wuxuu yiri: «Habeenimadii
gurigeyga ayaan tegi jiray, markaas ayaan
feynuusta intaan shito horteyda dhigan jiray.
Waxaan isku howli jiray dhigaal iyo akhris.
Markasta oo ay hurdadu iga adkaato ama
aan dareemo tabar-darri, waxaan isku toosin
jiray koob sharaab ah oo aan cabo illaa
uu xooggeygii uu ii soo noqdo. Dabadeed
waxaan ku laaban jiray akhriskii».
Isaga oo dhallinyaro ah ayuu wuxuu
bilaabey in uu dadka bilaash ku daweeyo
si uu ajar uga helo, isla-markaas uu aqoon
uga kororsado. Dadka uu daweeyey waxaa
kamid ahaa nin layiraahdo Suldaan Nuux
Ibnu Mansuur Al-Samaani. Isagu wuxuu
ahaa amiirka ka talinayay degaanka. Ibnu
Siina xilligaas da´diisu waxay ahayd 18
jir. Caafimaadkii uu Suldaanku ku heley
daweyntii wiilka yarka ah, Ibnu Siina Waxay
u saamaxdey fursad uu kaga mid noqdo
xaashida Suldaanka ku hareereysan.Aragtiyadiisi
Waxaa lagu tilmaamaa in uu ahaa macalinkii
saddexaad Arostoo iyo Furaabi dabadood.
Waxaa lagu naaneysi jirey Arostihii muslimka
ahaa. Isagu meelo badan oo ah faham
aragtiyo nololeed iyo kuwo aqooneed wuxuu
ku ahaa nin ka horeeyey casrigiisii. Wuxuu
si xooggan isugu howley cilmiga, laakiin taas
kama ayan mashquulin in uu ka qeyb-qaato
noloshii caamka ahayd ee xilligiisii jirtey.
Wuxuu la noolaa dhibaatooyin bulshadeed
iyo heyjado fikradeed. Wuxuu ka qeybqaatey farsamadii baraarugga aqooneed
iyo il-baxnimada. Howlihiisii waxay raad
xooggan ku lahaayeen in la tir-tiro caqliyaddii
iyo aragtiyaalkii jirey. Taasina waxay ka
muuqataa fikradihiisii iyo qoraalladii uu ka
Ibnu Siinaa ma noqon mid u dabran
aragtiyaalkii ay ka tageen raggii ka horeeyey,
bal wuxuu ahaa nin ka faallooda islamarkaana naqdiya aragtiyaalkaas. Markaas
ayuu wuxuu u bandhigaa muraayad caqli
ah. Wixii uu caqligiisa iyo qalbigiisa uu ku
qanco waa uu qaadan jirey, weliba inta kaMasjidka Poi Kalon ee Bukhaara.shaqeeyo ayuu wax ku kordhin jirey. Wuxuu
oran jirey: «Filosofiintu waa kuwo marna
khaldama marna asiiba sida dadka kale.
Mana ayan ahan kuwo khaladka ka reeban».
Sidaa darteed wuxuu si xooggan ula
dagaalamay curaafyeysiga oo xilligaas
ahayd howl aad u faafsan. Wuxuu kaloo
ka hor-yimid aragtiyaal kamid ahaa
aqoonta kiimikada oo ay dejiyeen rag
isaga ka horeeyey, kuwaas oo sheegey in
macdanta qaarkood ay isu beddeli karaan
dahab. Wuxuu sheegey in walxuhu ayanphoto thinkstocksi dabiici ah asaaskooda u beddeli karin,
cunsur walbana uu wato waxyaabo uu ka
rakiban yahay oo sugan. Caqligiisii faxnaa
iyo garashadiisii badneyd wuxuu ku darey
dadaal badan, markaas ayaa wuxuu noqdey
nin la xasdo. Rag badan oo xilligiisii noolaa
ayaa la dagaalamay oo ku sheegey in uu
gaalnimo ku dhacay. Isaguna waa uu iska
celin jirey oo wuxuu ugu jawaabi jirey:
«Iimaanka aan Eebe rumeysnahay waa mid
aanan ruxmaneyn. Haddiise aan sidaan ahay
gaal ku ahay, adduunka qof muslim ah ma
jiro».kafaalo magazine 201323taariikh & diintaKoleej lagu tababaro shaqaalaha caafimadka magaalada Afshona, loogu magac daray Ibnu SinaaKitaabkiisa Qaanuun Caafimaadka yaal Library of
Center, San Antonio, USA.Cilmi-Baarisyadiisi
Ibnu Siina wuxuu lahaa hibooyin aqooneed
iyo mid suugaaneed oo kala duwan. Aqoonta
cir-baradka (Astronomy) oo kamid ah
arimaha uu isku-howley, wuxuu daba-gal ku
sameeyey meeraha Dusaa (Mercury). Isaga
oo ku eegaya fiiro qaawan (indhaha) ayuu
wuxuu raad-raac ku sameeyey meereysiga
xiddiggan. Degmada Asfahaan iyo Hamadaan
oo labaduba ay ku yaaliin dalka Iiraan ayuu
ku sugnaa markuu baaritaankan sameynayay.
Natiijadii uu soo bandhigey waxay noqotey
kuwo dhab-ahaantooda la xaqiiqsadey dhowr
qarni dabadeed. Waxyaabaha uu ka sheegey
waxaa kamid ah in xiddiggan uu yahay
dhibic ku kor-taal qorraxda. Taasina waxay
xaqiijisey in xiddigga Dusaa uu yahay midka
ugu dhow qorraxda. Ibnu Siinaa wuxuu ku
fogaadey daba-galka hayaanka xiddigaha
iyo is-beddellada ay ku keenaan waayaha.
Goor danbe wuxuu hal-abuurey agab loo
adeegsado fiirada cirka. Arimahaas wuxuu ka
diyaariyey qoraallo badan. Waxaa kamid ah:
1) Daba-galka Guud ee Cirarka
2) Dhambaalka Agabka Dabagalka Cirarka
3) Kitaabka Malluug-Cireedyada
4) Kitaabka Qaabkii Daba-galka
iyo Sidii loogu Dabbiqi lahaa
5) Maqaal la Xiriira Qaabka
Dhulka uu Cirka ka yahay iyo
in uu Dhexda kaga yaal
6) Kitaabka Burinta Xeerka
Curaafsiga Xiddigaha24kafaalo magazine 2013Aqoonta Dhul-baradka (Geology) wuxuu
dhirta. Sidaas si lamid ah ayuu uga waramey
cimilada kaalmeysa dhir-bixidda.
wax ka diyaariyey dhismaha dabaqadaha
Aqoonta Dabiicadda (Physics), Ibnu
dhulka, gaar ahaan macdanta iyo sida
ay sameysmaan dhagxanta iyo buuraha.
Siina wuxuu kamid ahaa culimadii
Wuxuu xusey in ay ka sameysmeen dhoobo
Muslimka ahaa kuwoodii ugu horeeyey ee
qoyan oo wax ku dheehan yihiin, taas
u gogol-xaarey aqoonta casriga ah ee
oo wakhtigu uu raad ku yeeshey.
Dhul-gariirka ayuu isna
Isaga ayaa mahadda iskaWahmigu
wuxuu ku sheegey in uu
leh dejinta xeerka I-aad ee
yahay dhaqdhaqaaq ku
yimaada gabal kamid
Low of Motions). Kaas oo
ah dhulka. Sababtana
caafimaad, Sabarkuna sheegaya in jurmiyadu ay
wuxuu ku sheegey in ay
yihiin kuwo taagan ama
tahay dhacdo ka imaneysa
ku sugan socod nadaamsan
ugu horeysey oo lagu inta uu dibadda kaga
meelo fog oo hooseeya,
kaas oo xarakadiisu ay
imanayo xoog dhaqaajiya.
Arintaas ayuu Inbu Siina
ka koreeyey. Waxaa kaloo uu
sheegey xilli 600 oo sano ka
ka waramey daruuraha iyo sida ay u
horeysey markii uu sheegey Isaak Newton.
sameysmaan. Wuxuu tilmaamey in ay tahay
Waxaa kaloo uu si toos ah u haleeley farqiga
qaac-baxa biyaha iyo dhadada, kuwaas
u dhexeeya xawaaraha socodka ifka iyo
oo kuleylka dartiis kor u baxa. Dabadeed
midka codka. Taas oo qudheedu ah arin
markii uu ku dhaco qabowga hawada sare,
uu Isaak Newton ogaadey 600 oo sano
Aqoonta dhir-baradka (Botanics) ayuu
Aqoonta falsafadda oo uu ku fogaadey
wuxuu ka qorey kutub badan. Waxaa
wuxuu siiyey ahmiyad gaar ah. Diraasaad
kamid ah Al-Ishaaraat oo uu ku soo
aqooneed oo gaar ah ayuu wuxuu ku
bandhigayo mad-habtii Arastoo. Wuxuu ku
leeyahay dhirta dawooyinka. Wuxuu
soo dhoweynayaa diinta Islaamka. Sidaa
sameeyey tijaabooyin uu is barbar-dhigayo
darteed wuxuu ahaa ninkii ugu horeeyey ee
xididdada dhirta, caleemaha dhirta iyo
ku dhiirada falsafadda leys barbar-dhigayo
ubaxa dhirta ee kala duwan. Mid walibana
risaalada Islaamka iyo falsafadihii Giriigga.
si tifaftiran ayuu u tilmaamey, isaga oo
Wuxuu markaas ku dhowaadey aragtiyaalkii
si hoose u fasiraya. Wuxuu kaloo wax ka
filosoofkii ahaa Al-Furaabi oo qudhiisu lahaa
sheegey ciidda iyo noocyadeeda, iyo weliba
argtiyaal falsafadeed oo qallafsan. Waxaa
canaasirta raadadka ku leh koritaanka«»taariikh & diintaNuxurka:The University of Taxes Health Sceince•M
 agaca Ibnu Siinaa - Ab
uu Cali Al-Xuseyn bin Ca
wuxuu noolaa sanadihii
908 - 1037 miilaadi.
• Wuxuu ahaa caalim diin
eed, filosoof, dabiicad
suugaanyahan, iyo tak
• Wuxuu ku dhashay Afs
hona, degmada Bukha
• Culimada uu wax kab
artay waxaa kamida: Ca
bdullaahi AlNaa´ili, Ibnu Sahal AlMuseymi iyo Abu Al-Ma
• Wuxuu qoray in kabada
n 400 buug oo ay ugu
ka, Al-Ishaaraat, Musaa
racatu AlMasaaric, Al-Shifaa. Kit
aabkiisa Qanuunka Ca
ayaa looga faa'iiday. Tak
haatiirta caanka ah ee
marjica u ahaa waxaa
kamida: Ibnu-Nafiis, AlFakhr, Al-Raazii
iyo Al-Qudb Al-Shiiraa
• Waxyaalaha uu marho
re ogaaday oo uu sheega
y waxaa kamid ah:
» In meeraha Dusaa (M
ercury) yahay dhibic ku
» Macdanta, dhagxaant
a iyo buuraha inay ka sam
dhoobo qoyan oo wax
lagu dheehay, kadib wa
raad ku yeeshay.
» Dhul-gariirku inuu yah
ay dhaqdhaqaaq kayima
meel fog oo hooseysa.
» Daruuruhu inay kadhas
haan qiiqa biyaha iyo dha
ee kor ubaxa, kadibna
markii uu kudhaco qab
daruur isku bedala.
» Dajinta & falanqeynt
a 'First Low of Motions'
600 sano kahor Isaak
Newton.kaloo kutubtiisa falsafadda kamid
ahaa Musaaracatu Al-Masaaric iyo kitaabka
la yiraahdo Al-Shifaa.
Aqoonta xisaabta qudheedu door ayuu
ka qaatey Ibnu Siina oo wuxuu ka qorey
kutub badan. Waxaa kamid ah kitaabka
la magac-baxay Dhambaalka Xagasha,
kitaabka Soo Ururinta Arithmeetikada iyo
kitaabka Aqoonta Hey´adda. Ibnu Siina
waxaa kaloo uu wax ka qorey aqoonta
dabiicadda. Wuxuu ka tegey kutub ay kamid
yihiin Dhambaalkii xoolaha iyo Dhirta,
Dhambaalkii Fagaagga, Jurmiyada kore,
Onkodka iyo Biriqda. Xeerarka Dhaqaajiya
Jurmiyada Taagan.Takhasusaadkiisi Caafimaadka
Wax-qabadkii Ibnu Siina, meesha ugu
xoogga weyn waa dhanka aqoonta
caafimaadka. Wuxuu ka qorey kutub badan
oo ay kamid yihiin Kitaabka Dawooyinka,
Kitaabka Ka-fogeynta Korka Aadamiga
Dhibabk oo Dhan, Dhambaalka Siyaasadda
Jirka iyo Ahmiyadda Cabitaanka,
Dhambaalka kala Dhig-dhigga Xubnaha
Aadamiga, Dhambaalka Dawada iyo
Raashinka. Midka ugu qiimiga badan
wuxuu yahay kitaabla uu ku magacaabey
Qaanuunkii Caafimaadka ee uu qorey
sanadkii 1025-kii. Wuxuu si habeysan ugu
soo urushey aqoonta caafimaadka intii
xilligaas laga yiqiin.
Kitaabkaas oo muddo dhowr qarni ah
aadamiga dunida ku nool uu u adeegsanayay«Caqligaaadamiga waa
ah awoodda ay
taas oo aanan
karin.»Raazii iyo Al-Qudb Al-Shiiraazi.
87 jeer ayaa kitaabkan waxaa
aqoonta caafimaadka ayaa afaf
lagu turjumey afaf kala duwan. Markii
badan lagu turjumey. Kitaabku wuxuu ka
ugu horeysey oo la turjumey waxay ahayd
kooban yahay shan qeybood oo mid waliba
muddadii u dhexeysey 1150-1187. Gerard
uu yahay kitaab weyn. Kitaabka koowaad
wuxuu ka hadlayaa waxa ay yihiin cudur iyo of Cremona ayaa wuxuu ku turjumey afka
caafimaad iyo qaababka daweynta. Waxaa
Laatiinka. Nuskhaddaas ayaa 15 jeer lagu
kaloo uu ka hadlayaa qalliinka. Kitaabka
noqdey oo la daabacay. 15 jeer oo kalena
labaad wuxuu ka hadlayaa aqoonta
afka Cibriga ayaa lagu qorey. Sanadkii 1593dawooyinka (Pharmacology). Wuxuu
kii waxaa lagu turjumey afka Faransiiska.
Tan iyo dabayaaqadii qarnigii 17-aad
ku xusey saddex arin oo uu ka dhaxley
kitaabku wuxuu ahaa midka ugu hilan culus
tijaabooyin aqooneed ee uu sameeyey.
oo loogu noqdo aqoonta caafimaadka. Tan
Waxay yihiin, daawo cudurka ku haboon
iyo maantana wuxuu yahay midka ugu hilan
(indication), daawo aanan ku habooneyn
culus oo loogu noqdo aqoonta dhirta leysku
(contra-indication) iyo dhibaatooyinka ka
daweeyo. Allaha u naxariistee wuxuu
dhasha dawooyinka (side effects).
ahaa shakhsi loo hibeeyey
Kitaabka saddexaad wuxuu
aqoon, garasho, faham iyo
ka hadlayaa cudurrada
karti badan. Xikmadihii
xubnaha jirka. Kitaabka
laga dhaxley waxaa
afaraad ayaa isna wuxuu
ka hadlayaa qandhada,
keena. Waxaa kaloo
uu kitaabka qeybtiisan
ka dhashaan cuntada
kuwooda loogo jecelhoreysey oo lagu
caafimaado. Ka fogaada
haragga iyo sunta. Kitaabka
buuxiska), maxaa yeeley
shanaad wuxuu kaga hadlayaa
cudurrada badankoodu waxay
dawooyinka kala duwan, qaababka
ka dhashaan cuntada kuwooda loogo
leysugu dheeho iyo nafacooda.
jecel-yahay. Caqliga aadamiga waa awood
Takhaatiirta waaweyn ee ka kacay dunidii
kamid ah awoodda ay naftu leedahay, taas
Islaamka oo kitaabkan uu marjica u ahaa
oo aanan la dhayalsan karin.
waxaa kamid ah Ibnu-Nafiis, Al-Fakhr Al-«»kafaalo magazine 201325taariikh & diinta
Taariikhda Doktoorka &
fahamka diimaha dunida.Waa Kuma
Dr. Cali Maxamed
Dr. Cali M. Saalax wuxuu muddo ah 14 sano iyo kabadan kujiray cilmi
korarsasho ilaa uu ka gaaray heerka PhD. Wuxuu si kooban noogu ifin
Shiicada in uu asaasay nin Yuhuud ah, isla markaana ay ugu fog yihiin
qolo la yiraahdo Duruuz & Ismaaciliyiin, uguna dhow yihiin qolo la
cumar maxamed cabdiraxmaan
chartered linguist (interpreter)Dr. Cali wuxuu kamid yahay culimada
Soomaaliyeed ee ugu waaweyn. Wuxuu
Dr-ka imaam iyo khadiib ka yahay masjidka
Soomalida ay ku leedahay magaalada Oslo
ee xarunta wadanka Norway. Dr.Cali waxaan
ka dalbanay oo fursad ugu helnay isagoo
mashquulkiisa badanyahay inaan kusoo
booqanno xafiiskiisa oo ku yaalla masjid
Tawfiiq halkaasi oo aan kula yeelanay
wareysi kusaabsan shakhsiyadiisa iyo
waxbarashadiisa. Waxaan halkan idinkugu
soo bandhigeynaa wareysigaas.
S:	Dr. Cali halkee ku dhalatay?
J:	Waxaan ku dhashey Muqdisho.
S:	Xoogaa faahfaahsan ma nooga
sheegi kartaa yaraantaadi &
J:	Yaraanteydi waxaan kusoo barbaaray
Muqdisho, waxaana lasoo koray labada
waalid. Run ahaantii waxay aheyd mid
Ilaahey i waafajiyey inaan xoogga saaro
barashada cilmiga. Laga bilaabo markii
aan 13 sano jirsadey waxaan kuxirmay
Masaajidda. Halkaas oo aan culimo
kala duwan kula kulmay, kana diin iyo
cilmi qaatay. Arintaas waxay ii suurta
gelisay inaan wax badan oo ah culuumtii
wadanka lagu hayey aan ugu xereysto
culimada wadanka, intaanan Jaamacad
bilaabin. Laakin Seddexdii Masjid
Dhagaxtuur, Ceel-hindi iyo Siigaale ayaa
wax badan oo aan fadhiyey waxa ay igala
qiimo badnaayeen dhamaan Jaamacadahii
aan shahaadooyinka kasoo qaatey.26kafaalo magazine 2013S:	Halkee kusoo qaadatay
J:	Markii iigu horaysay waxaan waxbarasho
usoo doontay dalka Sacuudi Carabiya
1987. Halkaa waxaan ku bilaabay
Jaamacadda Al-Madiinah Al-Munawarah,
kulliyada Xadiiska & Diraasaadka
Islaamiga. Kadib waxaan master-degree la
xiriira Ad-Dacwah & Diraasadka Islaamka
ku qaatay Makkah Al-Mukaramah. Kadib
waxaa uu u kacay xagaas iyo Malaysiya
halkaas oo aan sanadkii 2001 kasoo
qaatey PhD ku saabsan ”Theology and
Philosophy” iyadoo si gaar ah xooga u
saarayay ”Comparative of religions” oo ah
is barbardhiga diimaha.
S:	Yaa kugu dhiira geliyay inaad cilmiga
diinta ka gaadho heer Doktoornimo?
J:	Markii laga soo tago waafajinta Eebe,
waxaa i dhiira geliyay sheekha labada
waalid iyo culimadii uu wax kasoo bartey.
S:	Hawlaha aad soo qabatay Malaysiya
ama hadda hayso Norway wax
manooga taaban kartaa?
J:	Malaysiya inta aan joogay waxaan ka
ahaa macalin mid kamid ah Jaamacadaha
Malaysiya. Hawshaydu waxay isugu
jirtay cashar-bixin, madax kulliyadeed iyo
agaasime baraamijyo «Lecturer, head of
faculty and Programme Director».
S:	Maadooyinkee kadhigi jirtay
J:	Culuumta Islaamka, luuqadda Carabiga iyo
waxaa jira macaahid kutaala wadankaas oo
aan kadhigi jiray luuqada Ingiriiska.S:	Maadaama takhasuskaaga gaarka ah
uu yahay Xadiiska, hadana waxyar ma
nooga taaban kartaa diimaha dunida
kajira iyo meelaha ay ku kala duwan
J:	Diimaha marka laga hadlayo waxaa loo
qeybiyaa ’heavenly religions’ iyo ’earthly
religions’ oo loola jeeddo diimo Samaawi
ah oo loogu yeero ’Abrahamic faiths’ sida
Islaamka, Yuhuudiyada iyo Kiristaanka.
Qeybta kale diimaha dhulka, waxay soo
wada hoos galaya wax kasta oo diin lagu
magacaabo ee adduunyada ka jira. Isku
soo duuduuboo, waxaas oo dhan waxaa
xaq ka ah teena Islaamka. Inta kale waa
wax insaanku abuureen ama kudhextaariikh & diinta«Seddexdii MasjidDhagaxtuur, Ceelhindi iyo Siigaale ayaa
wax badan oo aan
fadhiyey waxa ay igala
kasoo qaatey.»Dr. Cali.Dr. Cali, Maktabkiisa
Photo Maxamed/Kafaaloqaseen waxyaalo aanan jirin ama aanan
xaq aheyn. Waxaanse u baraneynaa inaan
ka digtoonaano oo la inagu khaldin.
Sababtaa awgeed ayaan baryahaan danbe
ugu mashquulay kitaabka loo yaqaan
”Mawsuucatul Firaq Wal-Adyaan”, si
Muslimiinta gaar ahaan bulshadeena
Soomaaliyeed, waliba kuweena dibadda
jooga ay u lahaadaan aqoon buuxda oo
diimaha iyo firqooyinka la xiriira, si’aan
loo dagin ama loo lumin.
S:	Dhanka diinta Islaamka, waxaa la
xusaa Shiicadu inay kamid tahay,
fahan guud managa siin kartaa
noocyada Shiicada?J:	Ereyga Shiica micnihiisu waxaa weeye
"kuwii la saftay oo taagyeero u fidiyey
Cali Bin Abii Daalib iyo awlaadiisi (rc)".
Shiicadu maaha hal koox balse waa kooxa
badan. Waxaa asaasay nin la yiraahdo
Cabdullaahi Ibnu Sabaa oo asalkiisu
Hadaan faahfaahino waxyaalaha ay
aaminsan yihiin qolo kamida sida AlImaamiya ama Al-Ithnaa Cashariyah: Waxaa
Imaamiya loogu magacaabay waayo waxey
ku mashquuleen iney ka doodaan yaa madax
noqonaya? Ith-naa Cashariya waxaa loogu
magacaabay maadama ay aaminsan yihiin
iney jiraan 12 Imaam oo 11 kamid ah la
arkay, midka 12-aadna uu isku qariyeymagaala la yiraahdo Samuraa. Waxey
leeyihiin kitaab gooni ah oo aan aheyn
Quraanka oo la yiraahdo ’Faadimi’ iyo kutub
& nusuus aan aheyn kuwa Ahlu-Sunnaha oo
ay marjic ka dhigtaan.«Shiicadu maahahal koox balse waa
kooxa badan. Waxaa
asaasay nin la yiraahdo
Cabdullaahi Ibnu Sabaa oo
asalkiisu Yuhuud ahaa.»Dr. Cali.kafaalo magazine 201327taariikh & diinta
Waxyaalaha ay aaminsan yihiin oo
kooban waxaa kamid ah:
→ In Khilaafada Nabiga(scw) kadib uu
xaq u lahaa Cali Bin Abii Daalib (rc),
laakin laga xoogay.
→ In Imaam walba ka daardaarmay
imaamka ka dambeyn doona oo uu
si toos ah sheegay magaciisa ama
tilmaamtiisa. Nabiga (scw) inuu si toos
ah u magacaabay Cali Bin Abii Daalib
inuu uga dambeeyo khilaafada, Calina
uu sheegay in wiilashiisa Xassan iyo
Xusseen uga dambeynayaan khilaafada.
→ Wax layiraahdo ’Cisma’, oo ah in
Imaamyadadooda oo dhan dambiyada
laga dhowray mid yar iyo mid weyn
intuba oo aysan dambaabin.
→ Wax layiraahdo Cilmi al-ludani, oo ahin Imaamyadoodu mid walba leeyahay
cilmi gaar ah oo uu si gaar ah Nabiga
(scw) ugu sireystay, cilmigaasna maaha
mid kutubta ku qoran ee waa mid
qarsoon waxeyna ku kabayaan wixi
shareecada ka nusqaama.
→ Wax la yiraahdo ’Rajca’, oo ah in
Imaam kamid ah Imaamyadooda,
Muxamed Ibnu Xassan Alcaskari uu
soo laaban doona aakhir-zamaanka.
Markaas oo uu cadaalad aduunka ku
maamuli doona oo uu ka aargoosan
doono kuwa kasoo horjeeda.
→ Wax la yiraahdo ’Tuqyah’, oo asal u
ah diintooda. Tuqyah waa in qofka uu
qariyo mad-habkiisa iyo inuu Shiico
yahay ilaa Imaamka la sugayo soo baxo.
→ Wax la yiraahdo ’Mutca’, oo ah meher
waqti ku xadidan oo ninka uu haweeney«Waxay aaminsan yihiin iney jiraan 12Imaam oo 11 kamid ah la arkay, midka
12-aadna uu isku qariyey magaala la
yiraahdo Samuraa. Waxey leeyihiin kitaab
gooni ah oo aan aheyn Quraanka oo la
yiraahdo ’Faadimi.»Dr. Cali.Masjidka Wakiil ladhisay 1751 ilaa 1773,
magaalada Shiraz ee
Iiraan - Wikipedia28kafaalo magazine 2013qabayo mudda kooban oo xadidan
kadibna uu iska furi karo.
→ Wax la yiraahdo Baraa'ah, oo ah in laga
fogaado Abubakar, Cumar iyo Cuthman
(Allaha kawada raali noqdee) oo la caayo.
→ Wax layiraaho ’Muqaalaah’, oo in Cali
(rc) la gaarsiiyo meel aad u sareysa ilaa
qaarkood ay gaarsiiyeen Ilaahnimo.
Kuwaasi waa qaybo kamida caqiidada
qolada shiicada ee Imaamiyada ama
Ithnaa-Cashariyada, waana qoloda maanta
ugu balaaran xagga tirada iyo saameynta.
Waxaase jira qolooyin kale oo kuwan
kasii xag-jirsan sida Al-Ismaaciiliyah, AlNuseyriyah iyo Al-Duruuz. Kuwa ugu sahlan
waa Zeydiyada ee yiraahda khilaafada
Nabiga (scw) kadib waxaa iska lahaa Cali
Binu Abii Daalib.taariikh & diinta
S:	Maxaad kula talin laheyd dadka jecel
waxbarashada cilmiga diinta?
J:	Qof kasta oo xiisaynaya inuu
waxbarashada diiniga ah raacdo waxaan
kula talin lahaa ugu horeyn ikhlaas &
Alle ka cabsi, dadaal joogta ah iyo inuu
yeesho sheekh uu cilmiga ka barto.
Iyada oo uu ka bilaabayo xifdinta
Quraanka, Caqiidada, luuqada Carabiga
oo muhiim ah iyo culuumta kale oo uu
kala tashanayo sheekhiisa sida uu u kala
hormarin karo.Masjidka Shiicadu u aado xaj loogu yeero Maqaamu Imaam Xuseen ee Karbala, Ciraaq - WikipediaNuxurka:Dr. Cali Maxam
• Muddo 14 sano
Dr. Cali kujiray cil
Ibnu Sabaa, asalk
ilaa uu ka gaaray
• Wuxuu ku takh
• Waxay u qaybsa
Xadiiska iyo isbar
badan oo qarniga
an ugu balaaran yihiin Ithna Ca
• Malaysiya ka ah
n yihiin Iiraan,
a iyo luuqaiyo Lubnaan.
• Qaybaha kale wa
• Hadda wuxuu ku
xaa kamid ah
Calaawiyiin iyo ku
• Wuxuu Imaam
& Shiikh kaya• Waxay leeyihiin
hay Masjidka So
aab u gaar
ah oo layiraahdo
Tawfiiq – Oslo.
uga muhiimsan Qu
• Wuxuu dadka ka
qaataa doodo iyo
waxay xusaan in
Shiicad ay aslan
ee uusan aheyn
diineed.kafaalo magazine 201329dhaqaalaha & ganacsiga
Haween ay biyo
laâ&#x20AC;&#x2122;aan kudhacday.30kafaalo magazine 2013dhaqaalaha & ganacsiga
Fahmidda Dhaqaalaha waxay fududeyn
qaadasho go’aamo wax ku oola.Fahmidda
DhaqaalahaDhaqaaluhu waa cilmi lagu barto sida ay dadku u dabooli
karaan baahiyahooda aan dhamaaneyn, iyagoo ku
loolantamaya khayraadka xadidan ee dunida yaala. Isla
markaana aanan iska daadin dhiig badan.
mukhtar xuseen maxamed (qoransay)
it-engineer & economist
bsc/mbaFahmidda cilmigan waxay u fududaysaa
qofka inuu nolosha ku qaato go’aamo
wax ku ool ah, qaab fakarkiisu balaarto
marka uu samaynayo kala doorasho
dhawr waxyaalood oo uu ubaahan yahay,
ka faa’iidaysi wakhtiga iyo doorashada
qofka kuugu faa’iidada badan xag nolol
la wadaagid, xag wax soo saar ama xag
hogaan. Taasi waxay kadhigan tahay in
barashada cilmigaani tahay, mid saameyn
kuleh siyaasadda, bulshada iyo dhinacyo
badan oo kamid ah nolosheena. Sidaa
darteed waa arin u baahan ku baraarugid
iyo kahaysasho fakar guud. Marka waxaan
isku dayayaa inaan uga hadlo si fudud oo
kooban oo uu fahmi karo qofkii dhigtay ama
hada dhiganaya ama aananba wali horay u
dhigan.kala doorasho isku bedelasho labo walax
(trade of) iyo (opportunity cost) oo aan dib
Qaybahaas iyo kuwo kalaba waxay
hoos yimaadaan labo waaxood oo la kala
yiraahdo Macro-Economics iyo MicroEconomics. Midka hore wuxuu la falgalaa
arimaha dhaqaalaha ee la xiriira gobal,
qaran ama caalami, sida kobaca dhaqaalaha,
shaqo la’aanta, saameynta siyaasadda
dowladda, sicir bararka iwm. Midka danbe
wuxuu kusaabsan yahay dhaqaalaha guriga,
shirkadaha, shaqaalaha, tartanka suuqa,
sicirka alaabta, dakhliga, faa’iidada iwm.
Waxaa lagu kala gartaa (macro) waxaa
saameyn kuleh bey’adda dibada, meesha
(micro) saameyntiisu ka timaado bey’adda
gudaha.furayaasha asaaska fahan
cilmiga dhaqaalahaQeexidda Cilmiga DhaqaalahaWaxaa gundhig u ah fahmidda cilmigaan
dhawr aragtiyo oo ay si xeeldheer ugu kuuragaleen culumo kusamaysay aragtiyadaan
(theories) cilmi-baaris. Maadama maqaalku
kooban yahay, oo hadana aragtiyada
qaybahood laga haysto fakar-guud, ma
wada xusi karno dhamaan aragtiyadaas.
Balse waxaan ka xusayaa qaybo kooban oo
noo fududeynaya fahanka dhaqaalaha ama
xaaladeena bulsho sida: Khayraadka kooban
(resources), baahiyaha bini’aadamka ee
aan la xadidi karin (scarcity), heerka wax
soo saarka (productivity), kala qaybinta
xirfadaha shaqaalaha iyo takhasusaadkooda,
(division of labor and specialization),Kalmadda af-ingiriiska ah ee ’Economics’
waxay kasoo jeedaa kalmad Giriig ah ’
οἰκονομία	' loo akhriyo ’oikonomia’, iokos
waa guri, nomos waa sharci ama maamul.
Markaa macnaheedu waa maamulidda guri
qoys ku wada nool yahay. Ammaa xag cilmi
ahaan waxaan ku sharaxeynaa tusaale:
Maka yaabtay baahida insaanku inaysan
dhamaan, qofkii aqal degan wuxuu ubaahan
yahay guri dhawr qol ah, qofkii haysta guri
wuxuu ubaahan yahay villa-weyn oo dhex
kutaal ah, qofkii villa haysta wuxuu ubaahan
yahay gaari. Dadka qaar waxay usii baahan
yihiin dahab-ka midba midka uu kasii
qaalisan yahay. Dadku ha ahaadaan faqiirkafaalo magazine 201331dhaqaalaha & ganacsiga
ama taajir, waligood baahidoodu dhamaan
mayso, bini’aadamkuna ma deeqaan wax
aanan ciid aheyn siduu Nabi Muxamed (scw)
sheegay. Sidaa awgeed aadanaha baahidiisu
ma dhamaato ilaa uu ka galo qabri. Dhanka
kale khayraadka dunida yaala waa xadidan
yihiin. Marka cilmiga dhaqaalaha wuxuu
qeexaa barashada sida ay umad ama qolo
u isticmaali karto khayraadkaas xadidan ee
ay haystaan, iyagoo doonaya inay daboolaan
baahiyahooda faraha badan ee aan la xadidi
Khayraadku waa wax walba oo insaanku u
isticmaalayo inuu ku gaaro baahidiisa ama
waxa uu doonayo, waxaana si guud loo kala
• Natural resources: Khayraadka
dabiiciga ah ee Alle ugu deeqay
aadanaha, sida shidaalka,
badda,webiyada qoraxda, wakhtiga iwm.
• Human resources: Awoodda dadka
kujirta xag jismi iyo xag caqli, waa
kheyraadka midka ugu muhiimsan,
labadaasna waxaa ugu sii muhiimsan
• Capital resources: Raasulmaalka aad
shirkad ama ganacsi ku bilaabi karto
sida lacag, dhisme, mashiino, qalab,
alaab, si aad wax usoo saarto.
• Entreprenourship: Bilaabadda
dhaqdhaqaaq dhaqaale iyadoo qofku
ka faa’iidaysanayo sedexdaas kheyraad
ee kor kuxusan. Qofka hawshaan u
istaagana waxaa loo yaqaan ganacsiabuure (Entrepreneur), tusaale ahaan
ganacsata abuurtay Hormuud, Golis iyo
Telesom ama Bill Gates ee sameeyay
Windows, ama TATA Motors Hindiya
waxay ka faa’iidaysteen sedexdaas
khayraad midkood. Waxyaalahaas waxaa
la isku yiraahdaa (Factors of Production).naadirnimo (scarcity)
Khayrkaad oo idil waa xadidan yihiin, laakin
baahiyuha insaanku ma xadidna mana
dhamaadaan. Markaa (Scarcity) oran karnaa
waxay kadhalataa isla falgalka khayraad
kooban iyo baahiyaha insaanka ee aan
xadidneyn. Bini’aadamku badanaa wuxuu
isku dagaalo waa khayraadkaas xadidan
oo qof walba doonayo sida uu uheli lahaa
dhul deeqsin leh, wadan shidaal badan,
bad kalluun badan, magaalo dad badan
degan yihiin oo caanshur badan uga soo
xarooto, biyo iwm. Markaa waxaan halkaa
nooga baxaya dhaqaaluhu inuu kuleeyahay
saameyn weyn nabadda iyo nolosha
tayaysan.heerka wax soo saarka
Hadaba hadii ay yar yihiin khayraadka dunida
yaala, isla markaana la koobi karin baahida
insaanka, sidee buu insaanku ku hishiin karaa?
Arintaas waxaa kadhashay inay isla garteen
culimada cilmigaan diraasaysay (qaarkood
hoos kuxusi doonaa): Si uu aadanuhu isku
baa’bi’in waa inay xal u helaan sidii ay u
meeleen lahaayeen ama sida ugu wanaagsan
ugu isticmaali lahaayeen khayrkaadkaas
kooban. Sidaa awgeed waxaa la iswaydiiyaa
maxaan soo saarnaa? Sidee usoo saarnaa?,
Yaan usoo saarnaa? Si fudud waxaan oran
karnaa heerka wax soo saarka (productivity)
waa wax soo saarka oo loo qaybshay tirada
shaqaalaha ama inta saacadood ee hawsha la
hayay. Wax soo saarkuna wuxuu noqon karaa
natiijada markaa la filayo, cunto, lacag, qalab,
masaafo safar, arday, natiijo-imtixaan, faa’iido
dukaan iwm.«Bini’aadamku badanaawuxuu isku dagaalo waa
khayraadkaas xadidan oo
qof walba doonayo sida uu
uheli lahaa khayraadka
inta ugu badan.»Mukhtar Qoransay.Wadashaqeynta bini’aadamka
& sida la isugu baahan yahay.32kafaalo magazine 2013Shax muujinaysa naadirnimada (scarcity)Tusaale adiga laftigaaga kasoo qaad
inaad tahay arday waxaad haysataa 2
maalmood waa 48 saacadood (khayraad),
waxaana lagaa rabaa imtixaan buug ka
kooban 500 bog (productivity), wakhtigu
waa khayraad xadidan mana kuu hakanayo,
waxaad rabtaa inaad seexato, wax cunto,
cibaadaysato, waxna akhrisato, hadana
nasato, isla markaana imtixaanka keento
darajada ugu wacan (efficiency). ‘Efficient’
waa u isticmaalidda khayrkaadka kooban
ee aad haysato sida ugu macquulsan ee
loo dhaqaaleyn karo, si wax soo saarku
u bato, baahiyo badana loo daboolo.
Ogow, khayraadku aslan wuu koobnaa,
markaasaa la doonayaa in si xadidan loo
isticmaalo, si wax soo saarka u batto oo
ilaa xad macquula baahida taala suuqa la
daboolo, iyadoo si tayyo leh wax loosoo
saaray! Sidee macquul ku tahay ama
sidee lagu gaari karaa heer wax soo saar
tayaysan (Productive efficiency)? Waxaa
macquul ka dhigi kara fahanka aragtida
kala qaybinta shaqaalaha/shaqada iyo
takhasusaadka (theory of division of labor
and specialization).kala meelaynta shaqaalaha iyo
takhasusaadka (division of labor
Dhaqaalayahanadu qaarkood waxay
aaminsan yihiin si aad u gaarto heerka ugu
sareeya ee wax soo saar tayo leh, waa inaad
isticmaashaa aragtida loo yaqaan qaybinta
shaqaalaha si ay qaybtiiba xoogga u saarto
wax soo saar ama takhasus gaar ah (division
of labor and specialization).
Ibnu Khalduun oo la xuso inuu isagu
ka mudan yahay Adam Smith cinwaanka
“The Father of Economics2”, buugiisa
(Muqadimmah - The Science of civilization
‘Al’umran’), cutubka ugu horeeya wuxuu
kusoo bandhigay aragtida ‘division of labor”,dhaqaalaha & ganacsigaShax muujinaysa dhaqaalaha siduu bulshada ugu dhex wareegtilmaamayaa, hadii xirfadda shaqaalaha loo
meesha sidoo kale uu Adam Smith buugiisa
kala sameeyo takhasusaad kala duwan, in ay
«Wealth of Nations» si lamida ugu soo
shirkaddu kordhin karto wax soo saarkeeda,
bandhigay cutubka ugu horeeya 375-sano
isagoo tusaale u soo qaadanayay sameynta
kadib dhalashadii Ibnu Khalduun. Ibnu
biinka dharka lagu dhajiyo (pin-making)3.
Khalduun wuxuu aaminsan yahay qof walba
inuu yeesho takhasus gaara, waxay lagama
maarmaan u tahay in nolosha laga
Ibnu Khalduun iyo Adam Smith
samatabaxo, wuxuuna leeyahay
hortood waxaa arinkaan soo
qofka awoodiisa keliya kuma
bandhigay Plato buugiisa
Qof walba inuu
filna inuu kaligiis daboolo
(The Republic) bogga 103
baahidiisa. Haduu keligii
iyo Xenophon tixraaciisa
isku dayana ma sameysan
gaara waxay lagama (Cyropaedia). Iyadoo kahor
karo wax ku filan si uu
ay qaab aanan aheyn aragti,
maarmaan u tahay
unoolaado, xattaa hadii
laakin ficil ah u fuliyeen
in nolosha laga
uu ubaahdo waxa ugu yar
sida xabad rooti ah. Waayo
iyagoo ka fakarayay si ay
xabbadaas rootiga ah ayaa
ubaahan ina la beero qamadi,
wax soo saarkuna u batto saacad
kadib biyo, cusbo, qamiir, mashiin
walba4. Hadadaba sida aad heerka
usii baahan koronto, shaqaale iwm. Sidaa
ugu sareeya u gaarsiin laheyd wax soo
awgeed qof keligiis waxba masameysan
saarkaaga (maximizing productivity) waxaa
karo, hadii uu kaashanin awoodaha kale ee
asaas u ah, kala meelaynta shaqaalaha iyo
takhasusaadkooda kala duwan.«»Markaa wadashaqeynta iyo
takahsusaadka ayaa si labo-jibbaaran u
daboolaya baahiyaha dad badan oo isu
tagay. Smith wuxuu sidaas si lamid ahTrade off?
Go’aan walba oo aan nolosha qaadaneyno
wuxuu leeyahay doorasho kale. Ka waran
hadii aad haysato hal khayraad keliyaGanacsade ay u muuqdaan doorashooyin badan.iyo labo baahiyood ama dalab? Markaa
waxay dantu kugu kalifi kartaa inaad ka
tanaasusho daboolidda baahiyaha midkood,
waxaana loogu yeeraa Trade off. Tusaale
magaalada waxaa aad loogu baahan yahay
caano iyo subag, laakin shaqaalaha xirfadeed
oo kugu yar, awoodda korontada oo xadidan
iyo hal mashiin oo aad haysato masoo wadakafaalo magazine 201333dhaqaalaha & ganacsiga«Markii lawada yeesho halxirfad (Siyaasad, NGO-yo, Diin &
ganacsi hal-qaab ah), baahiyaha
jirana intaas ay kabadan yihiin,
wax soo saarku hoos ayuu
• Cilmiga dhaqaaluhu wuxuu qeexaa barashada sida ay umad ama qolo u isticmaali karto
khayraadkaas xadidan ee ay haystaan, iyagoo doonaya inay daboolaan baahiyahooda
faraha badan ee aan la xadidi karin.
• Microeconomics waa barashada
habdhaqanka shakhsiga, guriga, shirkadda
ama shaqaalaha go'aan qaadashadooda ku
wajahan khayraad xadidanWarshadda Kalluunka ee Laasqoraysaarku malahaanayo tayo (efficiency), isla
saari kartid caano iyo subag, laakin hal mid
ayaad soo saari kartaa. Markaa caanaha ama markaana ma noqon karo wax soo saar
subaga waa inaad mid ka tanaasushaa (trade heer sare ah (productivity). Taas waxaa
kadhalanaysa inaysan daboolmi karin
off). Laakin midkee ayaad dooran, ileyn
baahidii suuqa taalay. Sababtoo ah waxaa
labadii baahiba suuqa waxay uga jiraan si
dhacay arimo kasoo horjeeda qiyamka
daran’e? Markaa waa inaad labadaas
iyo akhlaaqiyaadka kobaca
baahi kusamaysaa doorashada
Go’aan walba dhaqaalaha. Arinkaan dartiis
midkooda ugu qiimaha badan
ayaa loogu soo diray Nabi
uguna khayraad isticmaal
oo aan nolosha
Shucayb tolkiis, (Huud 11:85).
yar, waxaana loogu yeeraa
Aayadaha kusoo degay reer
‘oppurtunity cost’. Sidee u
wuxuu leeyahay Shuceyb waxay si hoose noo
go’aansan kan ugu qiimaha
farayaan inaan fasahaad iyo
khiyaano la imaan markii ay
khayraadku yaraadaan, laakin
hagaajino kartideena wax soo saar,
Waa khasaaraha kuugu jira
anagoo si wanaagsan u isticmaalayna
doorashada kale ee aad sameyn laheyd
khayrkaadka Alle na siiyay. Hadii kale
ama u isticmaali laheyd lacag, wakhti
fasahaadkaas wuxuu keenayaa inay dadku
iyo kheyraad kale, marka aad gaarayso
iska daadiyaan dhiig badan.
go’aan keenaya kala doorasho labo shey
(trade off). Tusaale ahaan gaari Toyota
ah ayaad kusoo iibsatay $3000, laakin
kudul fakar intaan hoose
sedexdaas kun waxaad fasax ugu kaxeyn
Ka waran hadii dadkeenu lahaan lahaayeen
kartay caruurtaada ama kusoo cumraysan
takhasusaad kala duwan oo qofba dabooli
kartay ama waxaad kiro iskaga bixin
lahaa baahi gooni ah xagga aqoontiisa
kartay 3 bilood. Wakhtiga laftigiisa wuxuu
ama kartidiisa? Waa la isku baahnaan
leeyahay ‘opportunity cost’ inaad habeenkii
lahaa, waa la isdhamaystiri lahaa, waana
5-saacadood fiirsato TV, waxay nusqaan
la iskaashan lahaa. Kadib wax soo saarka
kutahay wakhtigii aad ku akhrisan kartay
ayaa kobci lahaa, sidaas ayaana looga
buug faa’iido kuu leh ama inaad aroortii
faa’iidi lahaa khayraadka xadidan ee la isku
shaqo u jarmaaddo. Markaa qofku inuu
haysto. Laakiin markii lawada yeesho hal
qaato go’aan dhaqaaleed, waa inuu qiimeeyo
xirfad (Siyaasad, NGO-yo, Diin & ganacsi
waxa uu qabanayo ama iibsanayo sicirka
hal-qaab ah), baahiyaha jirana intaas ay
ama wakhtiga ay ugu fadhido, inuu kuqabsan
kabadan yihiin, wax soo saarku hoos ayuu
karay wax arinkaas kasii faa’iido badan.
udhacayaa (minimizing on productivity).
Hadii kale arimahaas caksigood waxaa
Kadib baahiyahaas badan lama dabooli karo
ka dhalan kara sidii reer Madyan in
(unlimited wants), khayraadkuna awalba
miisaanka la kala khiyaamo ama la isku
wuuba yaraa (scarcity). Markaa waxaa
barxo biyo iyo caano laga soo saaray
bulshada kadhex dhacaya wax isku qabsi,
subag ama ganacsi kale? Markaa wax soo
laaluush, khiyaano, kadibna dagaal.«»34kafaalo magazine 2013• Macroeconomics waxay la falgashaa
go'aan qaadashada xaalad dhaqaale ee
gobal, qaran ama caalami.
• Khayraad (resources) u qaybsamaa afar
»Khayraadka dabiici ah
»Awoodda dadka kujirta xag jismi iyo xag
»Raasulmaalka lagu hawl bilaabi karo
»Bilaabadda dhaqdhaqaaq dhaqaale
• Naadirnimo (Scarcity) Isla falgalka
khayraad xadidan iyo baahiyo bini'aadam oo
• Heerka wax soo saarka (productivity)
shaqaalaha ama inta saacadood ee hawsha
• efficiency waa u isticmaalidda khayrkaadka kooban ee aad haysato sida ugu
macquulsan ee loo dhaqaaleyn karo, si wax
soo saarku u bato, isla markaana u tayo
• Si loo gaaro heer wax soo saar tayaysan,
waxaa loo baahan yahay in shaqaalaha la
kala meeleeyo shaqadooda iyo takhasusaadkooda
• Trade off inaad shey uga tanaasusho shey
faa'iidada shey kale.
• Shay inaad uga tanaasusho shey kale
dhaqaale ahaan waxaa kuugu jira 'oppurtunity cost'. Markaa qofku wuxuu ku khasban
yahay inuu qaato go'aanka sheyga ugu jaban
xag sicir iyo wakhti, uguna tayada fiican.
1) concise encyclopedia of economics, 2011
2) ibrahim m. oweiss, (ibn khaldun, father of
economics, state university of new york
3) wealth of nations, 1:1:3
4) universidad nacional de educacion a distancia, madrid 3-5 nov 2006ÂŤu celinta dadkeeni fahankoodi saxda ahaaÂťwww.kafaalo.orgWaxaad Kafaalo Magazine ka akhrisan
kartaa iPad ama Smartphones kale,
sidoo kale online ayaad uga akhrisan
kartaa computer-kaaga, nala soo xiriir,
si aan kuugu fududeyno.kafaalo magazine 201335dhaqaalaha & ganacsigaDhismaha bangiga BIS magaalada BaselMeelaha & Qaababka loo Qiimeeyo Maalgashiga HantidaMiyaad Ogtahay?Waxaan qormadan ku falanqayn doonaa qaab dhismeedka bangiyada yurubta galbeed iyo qaybo
ka mid ah caalamka intiisa kale. Waxaan kaloon ku falanqayn doonaa sharci dejinta, hab dhaqanka
guud iyo saamaynta burburka dhaqaale ee dhowaanahan caalamka soo foodsaartay.
yuusuf xasan maxamuudmanagement accounting (ing) // cfa charterholderBangiyada maalgashiga sida Lehman
Brothers ee burburay sanadkii 2008 ayaa
shaqadiisu waxay ahayd oo kaliya in ay
maalgelin sameeyaan. Maalgelintan oo
ay u fududaysay sharciyadii waqtigaas u
degsanaa caalamka oo u saamaxayay inay
qataro badan qaataan oo ay ugu waynayd in
la maalgeliyo daymaha guryaha laga iibiyo
dad aanan awoodin bixinta kharashkaas.
Hadaba si aan u fahamno sharciyadan36kafaalo magazine 2013adag ee qof walibaa hadal hayo waxaa ila
haboonaatay inaan qormadan ku qaadaa
dhigo waxa loola jeedo isbadalka sharciyada
iyo qaasatan saamaynta ay ku leedahay
Kadib markii ay Yurubta galbeed ka
midowday dhinaca lacagta ayaa waxaa loo
baahday in la helo sharciyo ay bangiyada
Yurub ka midaysan yihiin. Waxaa lasameeyay European Central Bank oo
xaruntiisa tahay magaalada Frankfurt ee
dalka jarmalka oo ay hoos yimaadaan
bangiyada dowliga ah sida tusaale ahaan
Deutsche BundesBank oo Jarmal ah iyo
De Nederlandsche Bank oo wadanka
Holland laga leeyahay. Bangiyadan waxay
masuul ka yihiin bangiyada aan dowliga
ahayn amaba madaxbanaan ee wadamada
ay ka dhisan yihiin haday noqon lahayddhaqaalaha & ganacsiga«Bangiyadan waxay masuul ka yihiin abuuritaanka bii’ad
degan iyo xaalad dhaqaale oo caafimaad qabta.»
Yuusuf X. Maxamuud.ay soo saareen gudiga xeer ilaalinta Basel.
Xeerarkan ayaa sheegaya inay boqolka
bangi ee ugu waawayn dunida inay heystaan
keyd (capital buffer) gaaraya sadex boqol iyo
afar iyo todobaataan bilyan oo Euro (€374 )
si ay u kaafiyaan dhibaato dhaqaale oo soo
food saarta. Inkastoon ilaa iyo hada aan la
isku raacin lacagta ilaa cadadkan la’eg.
Hadaba iyadoo ay jirto arimahan aan
soo sheegnay ayaa hadana waxaa kaloo
jira hay’ado madax banaan oo loogu
yeero (Credit Evaluators) amaba hanti
qiimeeyayaal. Waxaa ugu waaweyn oo aad
loo yaqaanaa Standard & Poors (S&P),
Moodys iyo Fitch IBCA.abuuritaanka bii’ad degan iyo xaalad
dhaqaale oo caafimaad qabta.
Intaas kadib bangiyadan aan soo xusnay
ee dowliga ah waxay kaloo ay ku wada xiran
yihiin bangi guud oo lagu magacaabo Bank
for International Settlements (BIS) oo
xaruntiisu tahay magaalada Basel ee dalka
Switzerland oo ay xubno ka yihiin wadamo
caalamka ka tirsan oo ay tiradoodu gaarayso
ilaa iyo 70 dowladood.
Bangigaan BIS masuuliyada ugu wayn
ee uu hayo waxay tahay sharci dejin iyo
u adeegid uu u hayo bangiyada dhexe ee
dawliga ah. Hadaba su’aasha imanaysa
waxay tahay sidee bangigan masuuliyada
intaa le’eg ku qaadi karaa anagoo ogsoon in
wadamada midowga Yurub ay leeyihiin bangi
dhexe oo ay ku midaysan yihiin Switzerland
na aysan ka tirsanayn Euro Zone? Jawaabtu
waa Switzerland oo leh taariikh dheer haday
noqoto arimaha bangiyada caalamka taas
oo siisay sumcad dheer oo ay ku mutaysatay
kalsooni buuxdana ka haysato arimaha
sharci dejinta. Waxaa kaloo intaas sii
dheer in sanadkiiba labo jeer ay afartanka
dowladood ee ugu waawayn xaga bangiyada
dunida ay xisaab xir u gudbiyaan qaasatan
warbixin ku saabsan lacagaha qalaad iyo
Khataraha ugu weyn ee sababay
burburkii dhaqaale ee dunida kuyimid
2008, waxaa kamida maalgelinta
deymaha guryaha dad aanan awoodin
European Central Bank - Frankfurt Jarmalka
Settlements (BIS) - Basel - Switzerland,
waxaa xubin ka ah 70 dowladood.
Shaqadiisa ugu weyn waa sharci dajin.
BIS waxaa la gundhigay 1930, hishiis
dhexmaray Jarmal. Beljim, Faransiis,
Biritan, Talyaaniga, Jabaan iyo
Iswiizarland.Hey’adahan aan dowliga ahayn ee madaxa
banaan waa shirkado laga leeyahay dalka
Maraykanka waxayna qiimeeyaan inay
bangiyadan yihiin ‘solvable’ kuwo ka soo
bixi waajibaadka saaran iyo in kale. waxayna
adeegsadaan shaxdan hoos ku qoran laguna
qiimeeyo bangiyada caalamka oo idil. Waxay
isticmaalaan hab amaba model la diyaariyay
‘probabilities’. Taas oo mararka qaarkood
sababi karta inay bangiyada kala kulmaan
dhibaato kaga timaado aaminaad la’aan,
aakhirkana sababta hoos u dhac faa’iido oo
aad u fara badan.Hanti Qiimeeyayaasha
(Credit Evaluators) waxaa kamida:
Waxay kasoo jeeddaa Henry
Waxaa la gundhigay 1860,
1941 ayay qaateen magaca
Standard & Poors (S&P).
Xafiiskooda guud New York - US
Waxaa loo celiyaa ninka layiraahdo John
Waxaa la gundhigay 1909
Xafiiskooda guud New York - USHadaba hadaan u kuurgalno sharciyadan
aan soo xusnay waxaa ugu waaweyn:
II. 	Basel capital Accord (Basel I)
III.	The new Basel capital Accord
(commonly known as Basel II)
IV.	Basel IIIFitch IBCA
Waxaa la gundhigay 1913
Waxaa gundhigay John Knowles Fitch
Xafiiskeeda guud London - UK iyo
New York - USKan koowaad waa habka guud amaba
uniform loo galiyay qaabka xisaab xirka/
sharci dejinta oo caalamka oo dhan ka
dhaxeeyo.Kan labaad iyo sadexaad waa xeerXarunta Guud ee Standard & Poors New York.1234567891011121314151617181920AAAAA+AAAA-A+AA-BBB+BBB-BB+BB+BBBB-B+BB-CCCCCCDShaxdan waxay tilmaamaysaa rating ama qiimayn standard ah oo sida halkan ku cad ay ugu sareyso triple AAA uguna hoosayso D (default). Waxaa shaxdan
isticmaala hanti qiimeeyayaashan aan kor ku soo xusnay bangiyada caalamka iyo hay’adaha maalgashiguna ay aad indhaha ugu hayaan oo ay la socdaan.kafaalo magazine 201337dhaqaalaha & ganacsigaGanacsigu qorsheyn ayuu ubaahan yahayInta aadan
Ganacsiga marka dhinac laga fiirsho wuxuu kor u qaadayaa dakhliga,
sumcadda, magaca qofka iyo kobaca dhaqaalaha bulshada oo idil.
Markii dhinac kale laga fiirsho, waxaa kudheehan khatar khasaaro
maal iyo wakhti hadii ganacsigu fashilmo.
saciid cali shireqoraa & la taliye // buux consulting // bsc, m.a. msc, mibc, miibfBilaabista ganacsi cusub waa arrin u baahan
ka fiirsi iyo ka baaraandegid xeeldheer.
Qoraalkan kooban wuxuu guudmar ku
samaynayaa masaa'isha waaweyn ee mudan
in la is waydiiyo inta aan safarka la bilaabin.
Wuxuu qofka ka caawinayaa siduu naftiisa
qiimayn buuxda ugu samayn lahaa. Wuxuu
sidoo kale soo bandhigayaa talooyin iyo
tusaalayn ciddii weelaysa ay, idanka Alle,
guulo ka keeni doonto ganacsiga.inta aadan safarka bilaabin
In la bilaabo ganacsi cusub ma aha arrin
sahlan. Waa arrin u baahan ka baaraandegid
iyo rog-rogid fara badan. Waa arrin u baahan
diyaargarow nafeed iyo jireed. Waa arrin
u baahan xirfad iyo aqoon. Waa arrin u
baahan waxyaabo fara badan, oo ogoontay,
Soomaalida badideeda ka maqan. Haddaba,
inta aadan safarka bilaabin waxaa muhiim
ah in aad qiimayn buuxda ku samaysid
naftaada, jirkaaga, aqooontaada iyo
xirfaddaada. Is waydii, maxaa kugu kalifaya
in aad ganacsi bilowdid? Ma waxaa ku
hilaacay fursad? Mise waxaa kugu kalifaya:
shaqo la'aan, wax kale oo aad qabatid baad
waydey, mise saaxiibbadaa baa ganacsi
yagleelay. Haddaad ka mid tahay kooxda
dambe, sida daraasado badani muujiyaan,
ganacsigaagu meel fog gaari maayo, marka
inta aadan waqtiga iyo maalka halligin mar
labaad sal muggii fariiso oo dib u eeg waxa
kugu kalifaya ganacsiga.38kafaalo magazine 2013Dabcan, dadka oo dhammi ma arki
karaan fursad sida dayaxii ka dhex
muuqata sayladda, waayo si fursad fiican
loo arko waxaa loo baahan tahay aqoon,
waaya'aragnimo iyo xirfad. Marka si aad
awood ugu yeelatid in aad arki kartid fursad,
waxaa muhiim ah, inta aadan safarka
bilaabin, in aad is waydiisid in aad leedahay
aqoontii, xirfaddii iyo waaya'aragnimadii ku
gayaysiin lahayd in aad aragtid fursad.
Waxaa sidoo kale muhiim ah, si aad u
ogaatid sahayda aad u baahan tahay, inta
aadan safarka bilaabin, in aad muuqaal
buuxa ka haysatid meesha aad u socotid.
In kastoo dadka ganacsiga kaaga horreeyey
iyo dadka la taliya labaduba macluumaad
ku siin karaa, haddana, waa in aad ogaatid,
qofka safarka marayaa waa adiga. Waa
muhiim, sidoo kale, in aad ogaatid in safarku
uusan dadka isku si ku ahayn oo meel qof
orod ku maray ayaa qof kale saantu kaga
dhammaataa.ma tahay qofkii saxa ahaa?
Daraasado badan ayaa muujiyey in dadka
bilaaba ganacsi meel fog gaara, ganacsi
sameeya faa'iido iyo koboc, ganacsi u babac
dhiga tartanka kana dhex muuqda saylada,
ay leeyihiin dabeecado iyo qaabdhaqan gaar
ah. Dabcan, dadku dabeecadahaas kuma
dhashaan ee waa wax la barto lana kobciyo.
Si aad haddaba u ogaatid waxyaabaha kaa
dhiman iyo waxyaabaha dhammaystirka u
baahan waxaa muhiim ah in aad taqaanodhaqaalaha & ganacsigaInta aadan
ganacsi bilaabin.kafaalo magazine 201339dhaqaalaha & ganacsiga
Daraasadaha badidoodu waxay muujiyaan in waxa ugu weyn ee
fashilka keena la xiriiro suuqa oo aan aqoon fiican loo lahayn
Saciid C. Shire.dabeecadaha dadkaas. Inkastoo dabeecadaha
dadkaas iyo sida loo weeleeyo labadaba aan
si faah-faahsan ugu soo guuriyey buugga
'Furaha Ganacsiga', haddana, haddaan wax
yar kaaga bidhaamiyo, dadkaasi:
• Waa kuwo naftooda ku kalsoon (selfconfidence)
• Waa kuwo dadaal badan oo is diri kara
• Waa kuwo u hamuuman in ay himilooyin
• Waa kuwo aan ahayn 'jar iska xoor' oo
dhabarka u rita khatar maxsuulkeeda la
• Waa kuwo caan ku ah curin, ikhtiraac
• Waa kuwo isu taaga sidii
mustaqbalkooda ay u hanan lahaayeen
• Waa kuwo dhibaatooyinka u dhabar
adaygi karama leedahay xirfaddii saxda ahayd?
Si aad u gaartid hadafkaaga ganacsi waxaa
lama huraan ah in aad leedahay aqoon,
waaya'aragnimo iyo xirfad la xiriirta
guud ahaan ganacsiga, gaar ahaan nooca
ganacsiga ee aad gelaysid.
Si aad u hirgeliso fikraddaada ganacsi;
si aad u qaadatid go'aammo ad-adag;
si muruqa, maalka iyo waqtiga aad uga
faa'iidaystid waxaad u baahan tahay
aqoon iyo xirfad. Qiimayn buuxda oo aad
ku samayso aqoontaada iyo xirfaddaada
inta aadan ganacsiga bilaabin waxay kuu
badbaadinaysaa waqti, xoog iyo maal intaba.
Qiimayntaasi, waxay sidoo kale saldhig u
noqonaysaa in aad hawsha markaasba guda
gashid, in aad waqti siisid, in aad raadsatid
saaxiib ama jaal hawsha ganacsiga kula gala.
Qiimayntaasi waxay sidoo kale saldhig u
noqonaysaa nooca dadka aad shaqaalaysid
iyo caawimaadda bannaanaka ka ah
ganacsiga ee aad baadi doonkeeda guda geli
Xirfadaha muhiimka ah oo la'aantood
ganacsigaagu dhutinayo waxaa ka mid ah:
• Maammulka maaliyadda: waa muhiim
in aad aqoon u leedahay xisaabaadka
maaliyadda, dhaq-dhaqaaqa lacagta
(cash-flow), maaraynta daymaha iyo
sidii aad xiriir fiican ula yeelan lahayd
maalgeliyayaasha iyo deyn bixiyayaasha,
i.e. bangiyada. Waxaa muhiim ah
in aad akhrin karto, kala dhig-dhigi
karto, xogna kala soo dhex bixi karto40kafaalo magazine 2013warqadaha xisaabaadka maaliyadda.
• Maammulka shaqaalaha: Shaqaalaynta,
tababbarista iyo gacan ku haynta
shaqaaluhu dhammaantood waa muhiim.
• Suuq-geynta: waa muhiim in aad
aqoon qoto dheer u leedahay sayladda,
macaamiisha, tartanka, badeecadda/
adeegga iyo bey'adda ganacsigaagu ka
• La dhaqanka macaamiisha (customer
service): waa muhiim in aad aqoon
dhammaystiran u leedahay sidaad ku
aqoonsa lahayd, ku soo jiidan lahayd,
gacanta ugu dhigi lahayd, waxna uga
gadi lahayad macaamiishaada. Ogow
macaamiishu waxay noqon karaan kuwa
aad adigu wax ka soo gadatid iyo kuwa
aad wax ka sii gadid labadaba. Waxay
sidoo kale noqon karaan sharikaad,
dawlado, hey'ado ama shakhsiyaad.
• Qorshaynta ganacsiga: waa muhiim
in aad leedahay himilooyin qeexan
iyo qorshihii aad ku gaari lahayd
himilooyinkaas. Waxaa sidoo kale
muhiim ah in uu jiro sidii aad ku
cabbiri lahayd hadba inta aad u jirto
himiladaadii.Daraasad ma ku samayn kartaa
Dad badan ayaa ku tegey in asbaabta ugu
weyn ee fashilka ku keenta ganacsigu la
xiriirto maalgelinta. In kastoo maalgelintu
muhiim tahay, la'aanteedna aan ganacsi
hanaqaadi karin, haddana, daraasadaha
badidoodu waxay muujiyaan in waxa ugu
weyn ee fashilka keena la xiriiro suuqa oo
aan aqoon fiican loo lahayn.
Dad badan ayaa ganacsi madaxa la
gala iyagoon ogyan: waxa ay gadayaan
cidda ay ka gadayaan; baaxadda baahida
suuqa; jihada suuqu u socdo; waxa
badeecaddoodu/adeeggoodu kaga duwan
yahay badeecadaha/adeegyada kale; heerka
tartanka; iyo in badeecadda/adeegga
sharciyan laga ganacsan karo.
Suuqbaaristu waxay jawaab u raadisaa
su'aalahaas aan kor ku xusnay iyo waxyaabo
kale oo fara badan. In qofku aqoon fiican
u leeyahay suuquna wuxuu wax weyn ka
beddelaa jaaniska badbaadada ganacsiga.Maalgelin kugu filan ma haysataa?
Maadaama aan la hubin goorta ganacsigaaga
lacag ku filani soo geli doonto, waxaaInta aadan hishiis ganacsi gelin.muhiim ahin aad meelaysid maalgelin ku
filan ganacsigaaga. Khasab ma aha in lacag
dheeri ahi meel kuu taallo, waxaase muhiim
ah in aad diyaarsatid waddooyinkii aad
ku heli lahayd lacag dheeri ah haddaad u
baahatid. Waxaa sidoo kale muhiim ah in
aad diyaarisid miisaaniyadda gurigaaga.Diyaar ma u tahay in aad bilowdo
Ganacsi cusubi wuxuu u baahan yahay
maal, muruq iyo waqti. Haddaba inta
aadan safarka bilaabin
waxaa muhiim ah in aad
naftaada qiimayn dhab ah
ku samaysid, saaxiibbadaa/
qoyskaaga aad la tashato,
arrintaada aad Ilaahay u
wixii kuu soo baxa aad ku
hawlgashid. Qiimayntaas waxaa
ka soo bixi kara in aad u baahan
tahay xirfad, waaya'aragnimo
ama aqoon dheeri ah. Waxaa ka
soo bixi karta in aad u baahan
tahay jaal aad ganacsiga wada
yagleeshaan. Waxaa ka soo
bixi karta in wax walba kuu
dhammaystiran yihiin. Waxaa
sidoo kale ka soo bixi karta
in aadan diyaar u ahayn in aadn
xilligaan lagu jiro ganacsi
In kastoo dad badani
ku gacan qaban karaan,
talooyin kugu biirin karaan,
markaad ciirsi u baahatana
aad u sheegan kartid, haddana,
ogow, qofka dhib iyo dheef wixii
ganacsigu dhalo dhabarka u ridanaya waa
adiga. Marka waxaa muhiim ah in aad is
waydiisid,diyaar ma u tahay in aad bilowdid
ganacsi cusub.dhaqaalaha & ganacsigaWadatashi inta aadan hawlgelin.kafaalomagazine 201341mashruuca migMIG
Xaliimo Waxaa loo maalgeliay
dukaankaan khudradda, waxaana
u suurta gashay inay isku
filnaato, caruurteedana ka bixiso
waxbarashada. Sidaas oo kale ayaad
qoys dhan oo tabaalaysan u gaarsiin
kartaa isku filnaasho. Ka qayb
qaado Mashruuca Isku-Filnaasho
Gaarsiinta (MIG), nala soo xiriir, si
aan kuugu sharaxno.42kafaalo magazine 2013mashruuca migkafaalo magazine 201343Ma doonaysaa
kusoo qorto KM
ama aad sponsor
qayb kamid ah?
Nagala soo xiriirWaxqabadka
Phone: +47 21 64 68 15
Mobil: +47 91 32 11 08
Mobil: +47 45 45 92 40
www.kafaalo.orgCusbitaalka Manhalee Hargaysa.Qalinjabinta Jaamacadda EAU ee Gaalkacyo.Amal Express Sweden
baaxad weyn una adeegta shirkadaha, hay`adaha iyo macaamiisha doonaya in ay
helaan adeeg hufan oo amaano iyo tixgalin ku dheehantahay.
Xafiiska Guud ee Amal Express Sweden
Tel: (+46) 031-199535 // Mob: (+46) 0736632349
Generalsgatan 2A, 415 05 Gรถteborgwww.amalsweden.comMacaamiisha sharafta leh ee shirkada Amal Express ku xiran waxay leeyihiin
faa`iidooyin badanoo ay ka mid tahay adeeg wanaagsan, lacagta oo wakhti yar lagu qaato,
qiima dhimis lacagaha badan iyo adeegyo kale.kafaalo magazine 2013All pages:12345678911121314151617182021222324252627282931323334363738404244InfoSaveLikeShareDownloadMoreKafaalo 2013 Published on Feb 20, 2014 KM is primarily designed to serve as an overview and research on Somalis in worldwide to keep them informed on their economical and social r...See MorekafaaloFollowRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore